ED Recovery Stories 8 - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက် - ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုကျော်လွှားနိုင်သည်
ED Recovery ကိုဇာတ်လမ်းများ 8
ED Recovery Stories 8 သည်အကောင့်တိုတောင်းသောစာမျက်နှာ ၈ မျက်နှာပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏အခြေအနေကိုယခု ၈ လခန့်သိခဲ့ပြီ ငါ nofap ကို PIED ကြောင့်စတင်ခဲ့ပြီး၎င်းကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပဲကျွန်ုပ်၏အမြွှာအစ်ကိုသည်လည်း PIED ရှိခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့လုံးဝပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပြောခဲ့ရင်ငါတို့ကဒီလုပ်ငန်းကိုစောစောစီးစီးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာငါတို့ရယ်တယ်။ ၈ လအကြာတွင်သူသည် ပို၍ တက်ကြွသောချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးယခုပျောက်ကင်းသွားပြီဖြစ်သည်။ သူသည်တစ်ပတ်လျှင် ၄ ကြိမ်ကဲ့သို့လိင်ဆက်ဆံသည်။
ငါထပ်ခါတလဲလဲထပ်တလဲလဲကြံ့ကြံ့ခံများနှင့်မှတဆင့်တွန်းအားပေးနေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်တရားသူကြီးကမပြောသော်လည်းရက် ၃၀ တွင်ကျွန်ုပ်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ ငါစိုစွတ်သောအိပ်မက်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောဘာမျှမရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောကြောင့်, ရက်ပေါင်းသုံးဆယ်အတန်ငယ်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ရပြီ။ ငါယုံကြည်မှုတိုးတက်လာပြီလို့ပြောလိမ့်မယ် မနေ့ကငါ twitter မှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာကိုကျပန်းကျီကျီကျင်းပခဲ့တယ်။ နောက်မှပေါ့ပေါ့တန်တန်မီးပန်းချီကသူမရဲ့နံပါတ်ကိုရလိုက်ပြီးဒီတနင်္ဂနွေနေ့မှာသူမနဲ့တွေ့မှာပါ။
ငါလိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားပြီးဘာတွေဖြစ်နေလဲကြည့်တာပေါ့ ငါဒစ်ခ်သေပြီဆိုရင်ငါသွားရတော့မယ်သိတယ် တစ်ခုခုကိုလမ်းငါဒီ shit အလုပ်ဖြစ်တယ်သက်သေပြအဖြစ်ငါ့အစ်ကိုရှိသည်။ ဒီတစ်ခါတော့ငါကျရှုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ LINK
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေတပြင်လုံးကြားဆက်ဆံရေး (5 နှစ်) သည်, ငါသည်ငါ့ရည်းစားအတွင်းပိုင်း orgasmed ဘယ်တော့မှခဲ့သည်။ NoFap ငါ၏ 7th နေ့ရက်တွင်, ငါဒီတော့အထိခိုက်မခံနှင့်ကဖြစ်ပျက်နိုင်အောင် horny ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားထောက်ပံ့ဘို့သင့်ကိုလူတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါသည်🙂ငါ့အဘို့ store မှာ NoFap ၏ကျန်ရှိပါတယ်ဘယ်အရာကိုမြင်ရန်စောင့်ဆိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်။ ကျနော်တို့အတူတကွဤသို့ပြုနေကြသည်။
ငါမညစ်ညမ်း၏ 40 ရက်ပေါင်းနှင့်အတူ ED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ
ကြှနျတေျာ့အင်္ဂလိပ်များအတွက်ဝမ်းနည်းပါတယ်။ porn စောင့်ကြည့်စရာမလိုဘဲ 18 ရက်အကြာမှာငါ 40 ပေါ့ခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်ငါနောက်တဖန်အရာတစ်ခုခုကိုကြိုးစားရန်ကြောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဒီညငါလိင်ဆက်ဆံကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့ပျက်ကွက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်, ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပေမယ့်ဒီည (နှင့်4ကြိမ် masturbated) အရာအားလုံးကသဘာဝခံစားခဲ့ရနဲ့ကျွန်မနောက်ဆုံးတော့သူကပြု၏။ ဒါဟာအံ့သြစရာကြီးကရှည်လျား3/4မိနစ်ကြာမြင့်မပြုခဲ့ပေမယ့်စူပါပျော်ရွှင်မိပါတယ်ငါ porn ငယ်ရွယ်စဉ်အတွက်တကယ်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ထင်ပါတယ်။
ဒါဟာသိပ်ပြီးမထင်ကောင်းထင်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့အတွက်ကြီးမားတယ်၊ ငါက porn မပါဘဲကောင်းကောင်းမကြိုးစားနိုင်ခင် သေးငယ်တဲ့ခြေလှမ်းများ
ငါ porn မပါဘဲပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အထွတ်အထိပ်
ရက်ပေါင်း ၆၀ ကြာပြီးနောက်မှာတော့မနက်မှာထင်းနေတာပေါ့
SEVERE PIED ရှိသူတစ် ဦး အနေဖြင့်၎င်းသည်အလွန်အားရှိစေသည်။ မနက်ခင်း၌လိင်တံလှုပ်ရှားမှုမျိုးကိုငါမြင်တွေ့ခဲ့ဖူးသည့်တစ်ခုတည်းသောအချိန်သည်ငါမတိုင်မီညသို့မဟုတ် PMF ရှည်လျားသော NoFap ဆေးထိုးသည့်အချိန်တွင် PMO'ed အခါ၌ဖြစ်သည်။ ငါ၏အ PIED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသရန်နောက်ထပ်ရက်ပေါင်း ၁၂၀ ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
အသက် ၂၇ နှစ် - ၄၅ ရက် - Libido The Roof The Roof - တိုးတက်မှုနှင့်နောင်တ
ဟယ်လို။ ကျွန်မစဉ်းစားပါပြီးကတည်းကငါထပ်ကြိုးစားကြည့်ဖို့သတ္တိတက်ဆွတ်ရှိသေးတစ်ခုခုဖြစ်သည့်အမျိုးသမီးနှင့်လိင်အခါငါသည်လက်ျာအပိုင်းအတွက်ပို့စ်တင်မှန်လျှင်သေချာဘဲ, အစစ်မှန်အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါပွင့်လင်း၌ငါ့ဇာတ်လမ်းကိုထွက်ရမှာလည်းအဘယ်သူမျှမ PMO ငါ၏ 45 ရက်ပေါင်းအကြောင်းပြောဆိုသင့်တယ်ထင်ကြတယ်။ မဆိုမှတ်ချက်များ, တုံ့ပြန်ချက်, သဘောတူညီချက်များနှင့်သဘောထားကွဲလွဲမှုများအမှန်တကယ်ကြိုဆိုခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုကြသည်။
ငါ့ကိုငါကဒီအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ဤ website ကိုမှဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်လိုကျေးဇူးတင်ဟုစတင်အသုံးပြုနိုင်မည်ကြပါစို့။ ငါတကယ်ငါတယောက်တည်းပျောက်ခြင်းနှင့်ကြီးနှင့်ငါ့ပြဿနာကိုအစဉ်အမြဲငါနှင့်အတူအနေဖို့မယ်လို့ထင်ကြတယ်။ သို့သော်ထို site အရေးပါသောအသတင်းအချက်အလက်နှင့်ရှင်းလင်းချက်များနှင့်အတူငါ့ကိုပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းနှင့်အောင်မြင်မှုပုံပြင်များကိုဖတ်ရှုငါ့ကိုဒီရောဂါဖယ်ရှားပစ်ရရန်မအဆုံးလှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်အသက် ၂၇ နှစ်ရှိပြီ။ PIED သည်လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ် (မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက် ၂ နှစ်ခန့်ကြာပြီးနောက်) လွန်စွာလေးလေးနက်နက်ကျွန်ုပ်၏ဘဝထဲသို့ခိုးဝင်သွားခဲ့သည်။ ငါဟာအရက်အလွန်အကျွံသောက်သူဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ (၄) နှစ်ကခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေမှာကြုံခဲ့ရတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါဟာစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုမရှိခဲ့ဖူးတဲ့အတွက်အဲဒီအရာတွေကိုသုံးလေးကြိမ်မလုပ်မိဖို့ငါသတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ ငါအကြိမ်အနည်းငယ် (များသောအားဖြင့်ဆေးလုံးများဖြင့်) အောင်မြင်သောလိင်ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်အတွင်းစိတ်တွင်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းခံစားခဲ့ရသည်မှာကျွန်ုပ်၏ libido သည်အလွန်နည်းပါး။ အင်တာနက်ပေါ်မှဖျားနာနေသောပစ္စည်းအသစ်များကိုကြည့်သောအခါမှသာနိုးလာလိမ့်မည်။
ငါဖျော်ဖြေနိုင်ခဲ့တုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကအခြေအနေတွေတိုးတက်လာတယ်လို့ထင်ပြီးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာငါ့စိုက်ထူမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်ခံစားခဲ့ရတယ်။ သို့သော်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နို ၀ င်ဘာလအကုန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးတစ် ဦး ၏နေရာတွင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အခုတော့ငါ ၀.၄ လီတာဗော့ဒ်ကာလောက်သောက်ပြီးပေါင်းပင်အချို့ကိုသောက်ပြီးသူတို့အပေါ်အပြစ်ပုံချနိုင်ခဲ့သည်။ မိန်းကလေးသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိနေပြီးအချိန်ကုန်ခံပြီးသူမကိုယ်တိုင် ၀ င်ရောက်သည်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ အဲဒါအမှန်ပဲ။ ဒီတော့ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတွေ့တာနဲ့ချက်ချင်းသိတယ်၊ ဒါကပြtheနာပဲ။
ငါမိန်းကလေးတွေရဖို့အမြဲတမ်းလွယ်ကူတယ်။ ၎င်းသည်ဝါကြွားရန်မဟုတ်ဘဲသင့်အားအိမ်ပြန်ရန်၊ လာရန် 'သင့်အတွက်ချက်ပြုတ်ရန်' သို့မဟုတ် 'သူတို့၏အသစ်သောအတွင်းခံအဝတ်အစားအသစ်များကိုပြရန်' သူတို့ကိုကမ်းလှမ်းရန်မည်မျှစိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်ကိုသင်အလေးအနက်ထားရန် ပြော၍ သင်သူတို့ကိုငြင်းပယ်ခြင်းသို့မဟုတ်အချို့ကိုပြုလုပ်ရန်လိုသည် အရာရာတိုင်းကိုအရာရာတိုင်းကိုသိသောကြောင့်သင်လုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ငါပြောမယ်၊ ဒါကအကြွင်းမဲ့အိပ်မက်ဆိုးပဲ။ ဘဝ၌ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအရာအားလုံးအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လိင်ကစားခြင်းတွင်ပျော်ဝင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယောက်ျားကဲ့သို့အချည်းနှီးသာဖြစ်သည် (သင်အိုင်းစတိုင်း၊ ဟော့ကင်းသို့မဟုတ်ဂန္ဒီ) မှလွဲလျှင်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလမ်းကိုငါစပြီးအကောင်းဆုံးကိုမျှော်လင့်ခဲ့တယ်။
1 မှနေ့ရက်များ 7: ငါရမ္မက်ခံစားခဲ့ရပေမယ့်အလွယ်တကူခုခံ။ ငါဒါစောစောထပေး၏လျှင်ငါအရှုံးသမားများကဲ့သို့ခံစားရမယ်လို့သိထားတယ်။ အနည်းငယ်နံနက်စိုက်ထူတယ်။ တစ်နေ့တာအတွင်းအဘယ်အရာကိုမျှ။
နေ့ရက်များ 7-28: Flatline ။ ဒီအပြာအပြာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရယ်စရာကောင်းတာကငါလေးနှစ်တာကာလအတွင်းနေထိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုငါသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာ 100% နီးပါးတူညီခံစားရတယ်။ အရင်တုန်းကဆိုရင် ၁၀ ယောက်ကိုတစ်ချိန်တည်းမှာငါကြည့်ကောင်းတယ်၊ ငါရော့ ငါစိုစွတ်သောအိပ်မက်တစ်ခု (နေ့ 10)
နေ့ ၂၈-၄၅ ရက် - Libido သည်ယခင်ကထက်ပိုမိုအားကောင်းလာခဲ့သည်။ အစစ်အမှန်ကျန်းမာသူရဲ libido အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုထိုးဖောက်ရန်သမိုင်းမတင်မီပင်ပင်ရင်းဖြစ်သောတိုက်တွန်းချက်ဖြစ်သည်။ လူ့ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုတည်းကိုသာ ဦး တည်ထားသည့်တစ်ခုတည်းသောသဘာဝ libido ။ ငါပြန်လာဖို့ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုမရှင်းပြနိုင်ဘူး။ ကျွန်ုပ်ခံစားရသောစိတ်သက်သာရာရမှုနှင့်အားအင်များအပေါ်အလွန်အမင်းအသေးစိတ်ရှင်းပြမည်မဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ရာသက်ပန်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်သည် ၄၅ ရက်တွင်သာ ဖြစ်၍ ဤအရာကိုမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်လက်တွေ့ကျင့်သုံးရန်မရှိသေးပါ။ စိုစွတ်သောအိပ်မက် - နေ့ ၄၀ ။
နောင်တရပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးလိင်စိတ်နည်းခြင်းကတစ်ခါတစ်ရံရုန်းကန်ရတတ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနည်းငယ်ထိမိပြီးနောက် (edging သို့မဟုတ် M မဟုတ်ဘဲ၊ စက္ကန့်တိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်မျှထိမိခြင်း) ပြီးနောက် ၃၇ နှင့် ၄၄ ရက်များတွင်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ် MO ကိုမခံရပ်နိုင်တော့ပါ။ ပထမဆုံးကျွန်ုပ်လက်ယာလက်ကိုမသုံးခဲ့ပါ PMO သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြproblemsနာများအတွက်အမှန်တကယ်တရားခံဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်ထင်သောကြောင့်၊ သင်၏လက်ကိုသာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းသည်ပြanနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒုတိယအကြိမ်ငါလက်ျာလက်ကိုအသုံးပြု။ ငါနှင့်ပတ်သက်။ အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ဒါပေမယ့်မနက်ခင်းစိုက်ခင်းတွေရှိတယ်၊ ငါဟာကောင်းမွန်ပြီးအရည်အချင်းပြည့်ဝတယ်၊ ထိန်းချုပ်မှုရှိတယ်၊ မိန်းကလေးတချို့နဲ့အတူရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းသပ်ကြည့်တော့မယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာတက် Sum မှ:
45 ရက်အတွက် NO PMO (မတစ်ခုတည်းရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံငါ့မျက်မှောက်သို့မဟုတ်တည်းဟူသောငါ၏စိတ်ကိုဖြတ်ကျော်)
(တစ်ခါတစ်ရံနီးပါးမပြောင်းလဲချဉ်ဆီအထိ 20 မိနစ်တည်တံ့) ပုံမှန်နံနက်စိုက်ထူ
တစ်ခုက ပို. ပို. touch-sensitive ယောကျ်ားဘဝ (ငါပေါ့နေစဉ်ကအချိန်လေးလွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ကတည်းကဒီပါဝင်သည်ငါ့ post ကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ငါကတိုးတက်မှု၏အားကြီးသောအရိပ်အယောင်ယုံကြည်)
Libido တိုးပွားစေသောအစားအစာ - နေ့တိုင်းသံလွင်ဆီ။ ငါးဆီ။ အခွံမာသီး, မြေပဲနှင့်ပျားရည် 10 ကိုအပိုင်းပိုင်း။ သဘာဝဆူးပင်အခြေပြုစောင်ရေ - တိုးမြှင့်ပေါက်။ L-Arginine (လူအချို့ကဘာမှမလုပ်ကြဘူးလို့ပြောကြပေမယ့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာပေါ်၌အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိရင်တောင်ဒီအဆင့်မှာငါ့အတွက်လုံလောက်သည်) ZMA (အချို့လူများကဘာမှမလုပ်ဟုဆိုသော်လည်း၊ ရလဒ်များအရအိပ်ယာပေါ်၌အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤအဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်အတွက်လုံလောက်သည်) သူတို့ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံနိုင်ရည်မရှိအောင်ငါနောက်ဆုံးနှစ်နှစ်ခုကိုစက်ဘီးစီးခဲ့တယ်။ သင့်ရဲ့အစားအစာထဲမှာ libido-boosters တွေထည့်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်တွင်သင်ပိုမိုထိန်းချုပ်မှုကိုခံစားရပြီးတစ်နေ့တာအတွင်းအသုံး ၀ င်သောအရာများကိုချန်ထားသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်အရကောင်းတာကသင့်ရဲ့လိင်စိတ်ကိုတိုးစေပြီး PMO မရှိဘဲကြီးထွားလာတယ်။
ရက်အနည်းငယ်အစောင့်အကြပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Read (ဒီယခု K9 blocker ကျေးဇူးတင်ထွက် ironed သည်)
အဲဒီမှာသင်က, ထို (ဒီသေချာအားလုံးကိုကျော်အခါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားအချိန်, တကယ်ပဲ, အကြှနျုပျ၏ရုန်းကန်မှုများနှင့် ပတ်သက်. ဤမျှလောက်များစွာသောအခြားအသေးစိတ်ရှိပါတယ်, ငါကပြောပြနိုင်သကဲ့သို့ရေတိုပေမယ့်) တိုတောင်း၌ငါ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသည်။ ငါပြောခဲ့သကဲ့သို့နှစ်ခု MOS ငါစောင့်အကြပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖတ်နေပြန်လည်နာလန်ထူဖြည့်စွက်ဖို့ငါ့အလမ်းအပေါ်သိသိသာသာလြော့ထားနိုင်ကုန်ကြောင်းစုစုပေါင်းနာရီစုံတွဲတစ်တွဲလျှင်တစ်စုံတစ်ဦးကငါ့ကိုပြောပြနိုင်လျှင်ငါသည်လည်း, မှတ်ချက်များတန်ဖိုးထားတုန့်ပြန်ချက်များနှင့်အကြံဉာဏ်နှင့်မည်ဖြစ်သည်။
အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ။ ခိုင်ခံ့နေဖို့, ဒီအရာအလုပ်လုပ်တယ်!
ကျွန်ုပ်သည် PIED ကုသမှုခံယူသော်လည်းကျွန်ုပ်တွင် DE ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမရှိသည့်တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး nofap ကိုစတင်ခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမ porn သေချာပေါက်အလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့် nofap ငါ့အဘို့နောက်ဆုံးနည်းနည်းလုပ်ပေးငါ့ကိုလိင်ကနေအော်ဂဇင်ရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လိင်ကိစ္စနောက်တဖန်ကျေနပ်စရာကောင်းပြီးငါအောင်မြင်ခဲ့တာကိုငါအရမ်းပျော်တယ်။ ထိုအခါငါအသက် 20 ရဲ့အစောပိုင်းအသက်အရွယ်၌ရှိသေးတယ်။ LINK
ငါမှာ PIED ရှိတယ်၊ ဒါကပြaနာတော့ဘူး။ ဒါ့အပြင်ငါနင့်ဘဝ၌အချိန်များစွာရရှိသည်နှင့်တူသည်, ငါမဟုတ်ရင် porn အပေါ်ဖြုန်းပါလိမ့်မယ်ကြောင်း။ ငါ့ရဲ့ဘဝပုံစံကို porn မပါဘဲတကယ်နှစ်သက်တယ်၊ ဒါကငါဂုဏ်ယူတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခုပဲ။
ကိုယ့် porn မပါဘဲလာ။ ဟစျကျွောလေ၏
ငါဒီဟာတခြားသူတွေကိုမျှော်လင့်ခြင်းသတင်းစကားဖြစ်ချင်တယ်လို့ထင်တယ်။ ငါမပါဘဲ cum လို့မရဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လာတဲ့အခါငါမှာညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုကိုခံစားခဲ့ရပြီးညတိုင်းခံစားမှုတစ်ခုအတွက်အလေ့အထဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီးစွဲလမ်းမှုကိုဖြတ်ပစ်ဖို့ကျွန်တော်ပန်းတိုင်ထားခဲ့တယ်။
ဟုတ်ပြီ ငါမပါဘဲညစ်ပတ်မရှိဘဲလာ။ ဟစျကျွောလေ၏ ငါစိတ်ခံစားမှုခံစားနေရတယ်လို့ငါထင်ပေမယ့်ငါကိုယ်တိုင်ရိုးရိုးသားသားဂုဏ်ယူတယ်။ တကယ်တော့ငါ့စိတ်ကူးကိုသုံးပြီးအသက်အရွယ်မရွေးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ဖို့မကြိုးစားဘူး။ ငါအိပ်ချိန်မတိုင်မီအော်ဂဇင်ခံစားချက်ကိုလိုချင်ရုံမျှသာမဟုတ်ဘဲချိုသောအခါ၌သာပြုမူသည်။
မရှုံးပါနဲ့ ငါကြည့်ချင်ဘယ်မှာယခုတိုင်အောင်ပင်အချိန်လေးဆက်ဆက်ရှိခဲ့သည်။ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်။ ဒါပေမယ့်ဒါကဤကဲ့သို့သောအခိုက်ကိုဖျက်ဆီးပစ်သည်။ ငါဒီမှာရှိနေခြင်းအတွက်သင်တို့အားလုံးကိုဂုဏ်ယူတယ် !!!
နေ့နံနက် ၁၄၁ ရက်မှာကျွန်တော်မရှိပါဘူး
ငါပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေမှာလိင်အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ ငါမှာ ED ပြproblemsနာမရှိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါသုတ်ရည်လွှတ်မှုပြ,နာတွေ၊ အားနည်းတဲ့စိုက်ထူမှုတွေနဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုနိမ့်ကျတဲ့အရာတွေကိုနှောင့်နှေးခဲ့တယ်။ ငါ rewire နေဆဲလိုခံစားရတယ် (ငါတသမတ်တည်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လိုအပ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်) ဒါပေမယ့်ငါအများအားဖြင့်အနာပျောက်။ လိင်သည်ညအချိန်တွင်အလွန်နောက်ကျ။ အရက်အလွန်သောက်ပြီးနောက်မှကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူခြင်းသည်ကျွန်ုပ်လိုချင်သကဲ့သို့ခက်ခဲသည်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုမိခဲ့သည်။ ဒါကနားလည်နိုင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်ဟာအလွန်အထိခိုက်မခံသေးဘူး၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအချိန်ကောင်းတယ်၊ ပါတီနှစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲ။ အခု ၅ လနီးပါးကြာရင်တောင် ၈၅-၉၀% ခံစားရတယ်။
ငါတစ်နေ့ 30 ရောကျခါနီးပွီပေါ့, ငါဝေးငါထွက်စတင်သွားပြီဘယ်လိုမြင်နေတာပါ။ ငါ PIED ခံစားခဲ့ရမသိခဲ့ပါ, ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုပဲဤမျှကာလပတ်လုံးငါသည်အပုံမှန်စွမ်းဆောင်ရည်တူသောအရာကိုမသိကြောင်းန့်ထုတ်ပြန်သွားလေ၏။
နောက်ဆုံးညဥ့်ဇနီးနဲ့ကျွန်မရင်းနှီးတယ်, နှင့်အရာခပ်သိမ်းရုံပိုမိုလွယ်ကူခဲ့ပါတယ်။ arousal အလွယ်တကူ လာ. , ငါအမှုအရာကိုတက်စောင့်ရှောက်ခြင်းအဘယ်သူမျှမပြဿနာရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါရိုးသားမှုငါကနဦးခိုင်မာသောလျင်မြန်စွာကွယ်ပျောက်သွားကြဖို့မျှော်လင့်ခဲ့လို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်အံ့သြခြင်းနှင့်သွားစောင့်ရှောက်ဖို့ရုန်းကန်နေထွက်ခွာသွားရလိမ့်မည်။ ဤအမှုကိစ္စမဟုတ်ခဲ့, ငါကငါ့အညစ်ညမ်းအခမဲ့ခရီးနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ငါသိ၏။
ယခင်ကငါစတင်ရန်ဆွအများကြီးလိုနေတယ်။ ကျနော်ကျိန်းသေငါ့ဇနီးရဲ့အကြိုက်ဆုံးမဟုတ်သောအရာ blowjobs မယ်ငါ့ကိုရဖို့တစ်ခုတည်းသော surefire လမ်းအဘယ်မှာရှိတစ်ဦးပွိုင့်မှရတယ်။ အခုတော့ငါကအမှန်တကယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာစေနှင့်အတွေ့အကြုံကိုနှစ်ဦးစလုံးအတှကျပျြောရှငျစရာဖြစ်ရှိနိုင်တော့မည်တူရဲ့အဘယ်အရာကိုသတိရပါ။ အဘယ်သူမျှမစိုးရိမ်စိတ်မရှိ, ပြဿနာများကို။
porn စွဲနှင့်အတူရုန်းကန်ထွက်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်လက်ထပ်ယောက်ျားအတွက်, သင့်အိမ်ထောင်၏မျက်နှာကို ထောက်. လည်းချိတ်ဆွဲထားတယ်။ ငါနေဆဲဒီအသစ်ပေါ့, ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးညဥ့်ငါ့ကိုငါ့အသက်ကို၏ဤအပိုငျးသုတ်သင်ပယ်ရှင်းလေ၏ခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးအစိုင်အခဲသတိပေးချက်အပ်ပေးတော်မူ၏။
ငါတောင်မှ porn နှင့်အတူသမျှတစ်ခုစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နိုင်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကနေအစစ်အမှန်လိင်အတွက် 30 စက္ကန့်အတွင်း orgasming ထံသို့သွားလေ၏။ lINK
ငါ့ကိုလူကိုကိုးစားမညျ။ ငါဆိုသည်ကားရန်ရှိသည်နှင့်သင်အလေးအနက်ထား porn စောင့်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်သောအရာကိုနားထောင်ပါ။
ငါဆယ်နှစ်ကျော် porn ကိုကြည့်ပါတယ်။ ငါစောင့်ရှောက်ဖို့အခက်အခဲစတင်, ငါ့နံနက်စိုက်ထူဆုံးရှုံးခဲ့ရ, ငါ့ဒစ်ပျော့ပြောင်းပြီး "သေပြီ" ခံစားရတယ်။ လိင်မှုကိစ္စမှာအချိန်နည်းနည်းလောက်စောင့်ရှောက်ပြီးရင်တော့ပျော့ပျောင်းသွားမှာပါ။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာတောင်ငါလုံးဝမခက်ခဲတော့ဘူး။
ငါ porn အပ်ကြောင်းကြောင့်ငါ့အဦးနှောက် rewiring မှအနည်းငယ်ပိုဆိုးတယ်, ကိုယ့် Shit နဲ့တူသလိုခံစားရတယ်, ငါ porn တက်ပေးခြင်းထင်ဘာမျှမပွုခဲ့ပေမယ့် (Flatline) ကပိုဆိုးစေပါသည်။
အခုနောက်ဆုံး ၃ ပတ်အကြာမှာစိုက်ထူမှုတွေပြန်ရောက်လာပြီ။ ပိုပိုပြီးများလာတယ်၊ ကျွန်မအသက် ၁၈ နှစ်မှာလိုခံစားခဲ့ရတယ်။ မင်းကညစ်ညမ်းတဲ့ရုပ်ပုံလွှာဖြစ်နေချိန်မှာတက်တက်ကြွကြွရှိဖို့လိုတယ်။ မင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီဟာကိုဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းကဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုယူပြီး instagram ကိုယူပြီးတန်ဖိုးရှိရှိအရာတွေကိုလုပ်ရမယ်။
ငါသည်သင်တို့၏စိုက်ထူ porn ကိုကြည့်မ 30 ရက်အကြာမှာနောက်ကျောအပြည့်အဝအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်လာကြလိမ့်မည်အာမခံပါသည်။ ကောင်းပြီ, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး 60 ရက်ပေါင်းက၎င်း၏ကယ့်ကိုဆိုးရွားလျှင်။ ဒါပေမယ့်ငါ့အ PIED အကြောင်းကိုတစ်နှစ်ကြာမြင့်နဲ့ကျွန်မနောက်ဆုံး porn ရန်မကပြောသည်သည်အထိသာပိုမိုဆိုးရွားလာပြီခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်သည် ၅ ပတ်ခန့်တွင်ထိုင်လျက်ကျွန်ုပ်ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းဤအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သည်။ ငါဖြစ်စေ fap မအကြံပေးလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သင်က porn မပါဘဲသေချာအောင်ရမယ်နှင့်၎င်း၏တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်ထက်မပို။
Edit: လိင်ပထမဦးဆုံးစုံတွဲရက်သတ္တပတ်စီမံခန့်ခွဲရန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်, ငါသည်လိင်စိတ်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်နေဆဲစိုက်ထူနှင့်အတူဒုက္ခရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ2ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ကြိမ်လုံးဝမပါ PMO နှင့်လိင်သွားလေ၏ပထမနှစ်ပတ်အတွင်း။ LINK
ဟေ့ကောင်တွေ။ ငါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညစ်ညမ်းမှုနှင့်အတူဖြစ်ပျက်နေသောအရာကိုထွက်တွက်ဆမတိုင်မီတစ်နှစ်ခန့် porn မှ ed ခဲ့သညျ။ ကျွန်မစာသားအတိုင်းမိန်းမတစ်ယောက်အိပ်ရာထဲသွားပြီးသွားဖို့အဆင်သင့်ရှိနိုင်တယ်။ Viagra perfectlyုံအလုပ်လုပ်ပေမယ့်ငါကသုံးပြီးမုန်း၏။ ybop ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊ လွန်ခဲ့သောတစ်လက။ ရက်သတ္တပတ် ၃ နှင့် ၄ အကြား၊ ကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်သည်နံနက်ယံ၌ခက်ခဲသောအရာများ၊ အစစ်အမှန်အမျိုးသမီးများနှင့်အတူပြန်လာခဲ့သည်။ သူတို့က ၁၀၀% မဟုတ်သေးပေမယ့်သူတို့သွားနေပြီ။
ငါဒီ site ကိုတွေ့ဒီတော့ဝမျးသာ
ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူပွင့်လင်းလိမ့်မည် လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်လောက်က၊ ငါခဏပြန်ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်ဒီလိုဆင်ခြင်တုံတရားအရလိင်ကစားစရာကိုဝယ်ခဲ့တယ်။ မကြာခင်မှာပဲသူကငါကစွဲလမ်းလာတယ်၊ ငါအရင်ကညစ်ညမ်းတဲ့နည်းအတိုင်းသုံးခဲ့တယ်ဆိုတာသိလာတယ် အဲဒါကြောင့်ငါကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါငါဖျက်ဆီးလိုက်တယ်။
ငါနောက်ဆုံးတော့လိင်ဆက်ဆံဖို့အခွင့်အရေးရတဲ့အခါအစစ်အမှန်လိင်မစမ်းမီကကစားစရာကိုသုံးခဲ့ပေမယ့်ငါနောက်ဆုံးမှာလိင်ဆက်ဆံဖို့အခွင့်အရေးရတဲ့အခါအစစ်အမှန်အမျိုးသမီးရဲ့ယောနိဟာတော်တော်လေးနိုင်ငံခြားတော့တယ်။ ငါလုံးဝအသုံးမ ၀ င်ဘူးလို့ငါမပြောနိုင်ဘူး (ငါမသုံးရင်တောင်မှငါတောင်မှပိုပြီးဆိုးလာလိမ့်မယ်) ဒါပေမယ့်ရလဒ်ကသိပ်မထူးခြားဘူး၊ ဒါ့အပြင်သူကအရမ်းချောတဲ့လျှောစောက် - အလားတူ rewiring အစီအစဉ်ကြောင့်ပြည့်တန်ဆာများသို့သွားရန်အကြောင်းပြချက်စတင်နိုင်သည်။
ငါဟာလိင်ကစားစရာတွေနဲ့ပြည့်တန်ဆာတွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့အငြင်းအခုံလို့ခံစားမိလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်စိတ်ဓာတ်ရေးရာအကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်မဟုတ်ဘဲ၊ ဒီအရာတွေကသူတို့ဟာတကယ့်အဖြစ်အပျက်ရဲ့စူပါလှုံ့ဆော်မှုတွေကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံနဲ့တူတာကြောင့်ဖြစ်တယ် လိင်ကစားစရာများသည်များသောအားဖြင့်အစစ်အမှန်လိင်ဖြစ်ရပ်များထက်ထိန်းချုပ်မှုပိုမိုများပြားသောအားကောင်းသည့်ခံစားချက်ကိုပေးသည်။ ပြည့်တန်ဆာများသည်အလွယ်တကူအလွယ်တကူ ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်အသစ်အဆန်းများကိုပေးသည်) ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကဲ့သို့ပင်အလွန်စွဲလမ်းစေနိုင်သည်။
မင်းက PIED ကြောင့်သင် pornfree သွားမယ်ဆိုရင်ဂယ်ရီ Wilson ကတောင် masturbation ကိုအကန့်အသတ်နဲ့ (က) ရှောင်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုလအနည်းငယ်ကြာနေစဉ်တွင်ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကစိုက်ထူမှုသည်ပြbeနာမဟုတ်သော်လည်း PE သည်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
ကောင်းသောအရာမှာသင်သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် PE ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင်သင့် ဦး နှောက်သည် REAL အမျိုးသမီး၏လိင်အင်္ဂါခံစားရပုံကိုကောင်းစွာပုံနှိပ်ပေးသည်။ ထိုအချိန်တွင်သင်၏ရွှေနှင့်လိင်သည်အလွန်ကောင်းသည်။
ငါဒီဟာကိုရိုးရိုးသားသားလုပ်ခဲ့တာလို့ပြောလို့အရမ်းအံ့အားသင့်သွားတယ်။ ရက်ပေါင်း ၄၀ ကြာကျွန်ုပ်သည်လူသစ်တစ် ဦး နှင့်တူသည်ဟုခံစားရပြီးကျွန်ုပ်ဘဝသည်သိသိသာသာပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ငါအတန်ကြာလေလွင့်နေတယ်၊ ​​ငါပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လာပြီလို့ခံစားရတယ်ငါ့ gf ရဲ့ Boob ကိုတို့ထိလိုက်ပြီးအတန်းထဲမှာအပိုဆုကြေးရခဲ့တယ်။ PIED ပြီးနောက်ငါလုံးဝအဝတ်အချည်းစည်းအမျိုးသမီးနှင့်အတူဖျော်ဖြေနိုင်ဘူး။ စည်းကမ်းချက်သည်အလွန်ဆိုးရွားသည့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုဖြစ်သည်။ ငါလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မင်းဒါကိုလုပ်နိုင်တယ်။ ကျန်းမာပြီးပြည့်ဝသောဘဝတစ်ခုသို့ရောက်ရန်လမ်းသည်လက်လှမ်းမမီနိုင်သောနီးပါးဖြစ်သည်။ အင်အားသည်ကျွန်ုပ်၏ fapstronauts များနှင့်အတူပါစေ။ Day 40! :) LINK
ငါသည်ငါ၏ပြေးပြီးအအေးရေချိုးခန်းကို ယူ. အကြီးခံစားရတယ်။ ငါရေချိုးခန်းမှထွက်ရတယ်ပြီးနောက်ကျွန်မအပေါ်တစ်ဦးအရူးအမူးရှိသည်သောမိန်းကလေးတစ်ဦးအကြောင်းကိုထင်နှင့်ချက်ချင်းနီးပါးတစ်ဦးစိုက်ထူတယ်။ ငါပျောက်ကင်းအောင်ကုသစေခြင်းငှါထင်ပါတယ်။ 78 ရက်ပေါင်းခက်ခဲ mode ကို?
yeah ငါဆယ်ကျော်သက်အဖြစ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကတရားခံလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဖြစ်ခဲ့သည်သင်ယူပြီးနောက်ငါသည်ငါ၏နှေးကွေးပြန်လည်နာလန်ထူစတင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးမှာ porn ၏လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ခြင်း၏အကြောင်းကို2နှစ်ကြာပြီးနောက်ကျွန်မအသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဖက်နှင့်အတူကြိုးစားရန်နိုင်ခဲ့သည်ကြောင့်ထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
မှတ်ချက်ပေးရန် Link ကို။
ဒါအလုပ်ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့မင်းကိုပြောနိုင်တယ်၊ ငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်မလာတော့ဘူး၊ လတစ်လထဲမှာ pmo-ing မရှိဘူး။ ငါနေသင့်တဲ့နေရာမှာမဟုတ်သေးဘူး၊ ငါစလုပ်တုန်းမှာငါဟာညစ်ညမ်းရုပ်ကိုတောင်မကြိုးစားနိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒါကကိုယ့်ကိုညစ်ညမ်းတဲ့စွဲစွဲလမ်းစေမှုနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းကကျွန်ုပ်အတွက်နေ့စဉ်အလေ့အထတစ်ခုဖြစ်လာတယ်၊
ငါသည်လည်းယေဘုယျအားဖြင့်ပိုပြီးယုံကြည်မှုခံစားရသည်။ ငါမိန်းကလေးတွေနဲ့ပရောပရည်ချင်တယ် ငါပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ချင်တယ်။ ငါပိုကောင်းတဲ့ဘတ်စကက်ဘောကစားသမားဖြစ်ချင်တယ်။ ငါအပြင်ထွက်ပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပျော်မွေ့ချင်တယ်။ ဒါဟာသင့်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေမယ့်အရာပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိပါကစိတ်ရှည်သည်းခံပါ။ သင်သည်စွဲလမ်းသူတစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်း၊ သင်သည်ဤသို့မပြုလုပ်ပါကသာမန်လိင်မှုဆိုင်ရာဘ ၀ ကိုပိုင်ဆိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း၊
နည်းနည်းစမ်းသပ်ဖို့အတွက်မနေ့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ငါစိုက်ထူတယ်၊ ပြproblemsနာမရှိဘူး၊ ၁၀၀% မဟုတ်ဘူးဒါပေမယ့် ၉၀% ။ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ် အဘယ်သူမျှမ porn, မျှစိတ်ကူးစိတ်သန်း, ဘာမျှမ။ ကောင်းလိုက်တာ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ခံစားခြင်းကိုနောက်ဆုံးခံစားခဲ့ရသည့်အချိန်ကိုမမှတ်မိနိုင်ပါ။ ယနေ့ငါ၌မည်သည့် chaser effect မျှမရှိဘဲကျွန်ုပ်ထွက်သွားရန်မျှော်လင့်ထားသည့်မိန်းကလေးနှင့်ပရောပရည်လုပ်နေစဉ်တွင်ငါအလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်းခံရဆဲဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်စဉ်းစားနေပြီလို့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးတဲ့နောက်မနေ့ကသူမကိုပြောခဲ့တယ်၊ သူမမျက်နှာမပျက်တာကိုပြောတာပါ။
ငါချက်ချင်းပင်ချက်ချင်းပင်ခဲယဉ်းတယ်။ အဲဒါငါ့အတွက်အချိန်အကြာကြီးမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ငါပျော်တယ်၊ ယုံကြည်တယ်၊ ငါမရှိတဲ့ PMO ခရီးဟာအဆုံးသတ်တော့မယ်ထင်တယ် ကျွန်ုပ်သည်ဝန်ခံရမည်မှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်အခက်ခဲဆုံးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ဤဖိုရမ်သည်ကျွန်ုပ် ၆ လတာကာလအတွင်းဤဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၊ ငါ့ပုံပြင်ဟာသာဓကတစ်ခုလို့မင်းထင်တယ်၊ မင်းပြန်ဖြစ်လာရင်အရေးမကြီးဘူး၊ တစ်ခုတည်းသောအရာကဆက်ပြီးဆက်ဖြစ်နေဖို့ပါ။
ဤအမှုကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ပါတယ်။ ငါစတင်ခဲ့သောအခါကူကယ်ရာမဲ့ခဲ့အကြီးအကျယ်စွဲနှင့်ပညာရေးပြဿနာများအားဖြင့်နှောငျ့။ အခုတော့အရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်ဤပေးနေတာပြီးနောက်ပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ဦးနဲ့တူခံစားကြရသည်။
ဒီနေ့ပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အပျိုစင်ဘဝနှင့်ရှုံးနိမ့်မှုပျောက်ဆုံးရန်ကြိုးစားပြီးနောက်မေလ ၁၂ ရက်မှ စတင်၍ သာကျွန်ုပ်ပြန်လည်စတင်နေပြီဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီဒီနေ့တော့ငါဟာအပျိုမဟုတ်ဘူး။ အပြည့်အဝမခက်ခဲသောကြောင့်အနည်းငယ်အခက်အခဲရှိသော်လည်းပိုကောင်းသောအချိန်ပိုရသင့်သည်။ ငါ့ပခုံးပေါ်ကတင်ထားတဲ့အလေးချိန်ကိုမင်းမသိဘူး။
ငါ ၃၃ နှစ်ရှိပြီ၊ PIED နဲ့ ၂ လနီးပါး nofap အသင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးကြိုးပမ်းမှုမှာ ၂၅ ရက် hardnode ကိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခဲ့တယ်။ နေ့ ၂၆ ငါ blowjob ရပြီး ၂၄ နာရီ PMO အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဒုတိယကြိုးပမ်းမှု၏ ၆ ရက်တွင်ယခုကျွန်ုပ်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏နှစ်စဉ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ယနေ့နံနက်တွင်ဆရာဝန်များနှင့်ချိန်းဆိုထားသည်။ ငါအခန်းထဲမှာထိုင်, ငါ့လက်ဝှေ့သမားအကျဉ်းချွတ်ချွတ်နှင့်ဆရာဝန်ရောက်လာရန်စောင့်ဆိုင်းရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ ဆရာ ၀ န်သည် ၀ င်လာပြီးမေးခွန်းအနည်းငယ်မေးသည်။ ထို့နောက်သူသည်စာမေးပွဲကိုစတင်သည်။ နား၊ လည်ချောင်း၊ ရင်ဘတ်စသည်ဖြင့်နောက်ဆုံးတွင်၊ ငါအကျဉ်းချုပ် drop ဖို့ပြောတယ်သူသည်အလုပ်သွား၏။ ကျွန်ုပ်၏ဘောလုံးများကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်ကို ဦး ခေါင်းနှင့်ချောင်းဆိုးစေခြင်း။ ထိုအခါငါထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုစိုက်ထူရှိသည်စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ရှက်စရာကောင်းသကဲ့သို့ Nofap သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏လိင်တံယခုစူပါအထိခိုက်မခံပါ! (ကောင်းသောလမ်းအတွက်!)
အဘယ်သူမျှမ fapping / No Porn
ငါလည်းလွန်ခဲ့သောတစ်လခန့်ကဤ site ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ တစ်လမျှညစ်ညမ်းမှုမရှိသည့်နောက်ကျွန်ုပ်သည်အိပ်ရာပေါ်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစိုက်ထူမှုကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ကြောင်းတွေ့ရပြီးကျွန်ုပ်သည်လိင်၌ ပို၍ ပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ ငါ fapping လုံးဝမထွက်နိုင်ပါ။ ၅ ရက်ကြာမှတည်ဆောက်ပြီးသော်ကျွန်ုပ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်သူဟုခံစားမိသည်၊ ယခုတစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်သာလုပ်လေ့ရှိသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကမကြာသေးမီကမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းနိုင်ခဲ့ခြင်း၊
တကယ်တော့ 10 yrs လွန်ခဲ့တဲ့ငါ၏အကောလိပ်ကျန်းမာရေးလူတန်းစား၌ဤဆွေးနွေးမှုရှိခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းအမှန်တကယ်ရငျးနှီးနေစဉ်အတွင်းသငျသညျ desensitize နိုငျသောအငြင်းအခုံ w သဘောတူသတိရပါ။ ဒါပေမဲ့အချိန်က 18 ကြီးနှင့်လေတိုက်မှားလမ်းမှုတ်လျှင်ငါ၏အဒစ်ခက်ရလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သဘာဝငါစိုးရိမ်ဖို့ဘာမျှခဲ့နေသေးတယ်။ ငါ 10 နှစ်အရွယ်မှာ porn စောင့်ကြည့်တော့တာပဲ။ ငါ့အဖေကအမြဲအိမျတျောကိုလှည့်ပတ်တိပ်ခွေရှိခဲ့နှင့်ငါ၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေများကိုအဖေလက်တွေ့ကျကျ porn တစ်ဦးစာကြည့်တိုက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာအလွန်သုံးစွဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါအင်တာနက်တလျှောက်သို့ရောက်လာသည်နှင့်အသုံးပြုနိုင်စွမ်း amplified ။
အခုတော့အသက် ၂၈ နှစ်ရှိပြီ။ မနက်တိုင်းလိုလိုကြည့်နေတယ်။ ငါနိုးထဖို့၊ ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်ရန်ငါ့နံနက်ခင်းထုံးတမ်းစဉ်လာဖြစ်သည်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကသူ့ထင်မြင်ချက်မှာပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်မဟာ porn မသုံးချင်တော့ဘူး။ ငါငယ်ငယ်တုန်းကငါ့စိတ်ကူးကိုပဲသုံးနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကငါအတွက်တော့ဘာမှမလုပ်ဘူး လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ခန့်ကကျွန်ုပ်အနေဖြင့်နွေးထွေးသောအချိန်ကာလတွင်ကျွန်ုပ်သည်ရာထူးများကိုအမြဲမပြောင်းလဲလျှင်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်လုပ်နေခဲ့ရာများနှင့်မတူလျှင်ကျွန်ုပ်သည်ကြိုးစားအားထုတ်မှုဆုံးရှုံးရလေ့ရှိကြောင်းသတိပြုမိသည်။ အစပိုင်းမှာတော့အဲဒါဟာကျွန်တော့်ကိုစိတ်ပျက်အားလျော့စေတဲ့ကွန်ဒုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ကွန်ဒုံးကိုရှာဖို့ကျွန်တော်စာသားအတိုင်းရှာခဲ့တယ်။
ဟေ့ဂိုဏ်း, အမည်များလူ၏ nick ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးရုံနဲ့ဒီဖိုရမ်မှာကျွန်တော်ဟာအသစ်ပါ။ ငါ ybop တစ်လသို့မဟုတ်ဒီလောက်လွန်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ဒါစိတ်သက်သာရာရခဲ့သည်! ငါနှင့်အတူအပြင်းအထန်မှားယွင်းနေသည်ဟုထင်ပြီးကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောအခြားယောက်ျားများရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းကကျွန်ုပ်အားပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၃ နှစ်ရှိပြီးလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုခံစားခဲ့ရပြီးယုံကြည်မှုပျက်ပြားသွားခဲ့သည်။ ငါဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်များနှင့်ရက်ချိန်းယူသွားခဲ့သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့ဒစ်မရှိရင်ငါမအသက်ရှင်ချင်ဘူး !!! ငါ့ရဲ့ရေရှည်ပြိုကွဲမှုကနေငါမတက်မီစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တယ်။
ငါညတိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားကိုစတင်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်။ ငါ smokin hott ကြက်သားနှင့်အတူရှိခဲ့ရင်တောင်ငါခက်နေဖို့နိုင်ဘူးသို့ရောက်လေသည်။ နောက်ဆုံးပေါ်အခြေအနေပိုမိုဆိုးရွားသွားသော်လည်းအနည်းဆုံး ၈ နှစ်ကြာ pmo'ing ဖြစ်နေသည်။ ကျွန်ုပ်၏သတင်းအချက်အလက်ဖြစ်လာခြင်းကြောင့် ybop ကိုရှာတွေ့သောဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါ။ လူငယ်များအကြားဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ အလေးအနက်အသိပညာရှိရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ငါပြီးသားအဲဒီမှာပိုကောင်းခံစားနေရတယ်နှင့်အမှန်တကယ်အခြားနေ့က Champ နဲ့တူ fucked! Lol ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
(အသက် ၅၀) အများအားဖြင့်ကျွန်တော်ဟာလိင်တူချင်းချစ်တဲ့သူ၊ ငါလွန်ခဲ့သောသုံးလကရပ်တန့်, အအေးကြက်ဆင်။ ယနေ့ခေတ်ကျွန်ုပ်၏အမှန်တကယ်စက်ယန္တရားသည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပါတယ် ညစ်ညူးခြင်းများသည်အလျင်အမြန်ဖြစ်ပျက်ပြီးကြာရှည်သောпорноခေတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကြာရှည်သည်။ အစဉ်မပြတ်ငါအဆင်သင့်ပါပဲ။
နေ့နံနက် ၁၄၁ ရက်မှာကျွန်တော်မရှိပါဘူး ငါပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေမှာလိင်အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ ငါမှာ ED ပြproblemsနာမရှိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါသုတ်ရည်လွှတ်မှုပြ,နာတွေ၊ အားနည်းတဲ့စိုက်ထူမှုတွေနဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုနိမ့်ကျတဲ့အရာတွေကိုနှောင့်နှေးခဲ့တယ်။ ငါ rewire နေဆဲလိုခံစားရတယ် (ငါတသမတ်တည်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လိုအပ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်) ဒါပေမယ့်ငါအများအားဖြင့်အနာပျောက်။ လိင်သည်ညအချိန်တွင်အလွန်နောက်ကျ။ အရက်အလွန်သောက်ပြီးနောက်မှကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူခြင်းသည်ကျွန်ုပ်လိုချင်သကဲ့သို့ခက်ခဲသည်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုမိခဲ့သည်။ ဒါကနားလည်နိုင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်ဟာအလွန်အထိခိုက်မခံသေးဘူး၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအချိန်ကောင်းတယ်၊ ပါတီနှစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲ။ အခု ၅ လနီးပါးကြာရင်တောင် ၈၅-၉၀% ခံစားရတယ်။
အဆိုပါ reboot ဖြစ်စဉ်ကိုငါ့အတိုးတက်မှုကိုလျင်မြန်စွာတိုးတက်အောင်ထားပြီးကျက်သရေနဲ့တူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ငါပိုကောင်းတဲ့ရှင်းပြနိုင်လိုပါ။ ၁ လအကြာမှာဇန်နဝါရီလကစပြီးပြန်ပေါ်လာတယ်။ နောက် ၁ လထပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ MO ကိုပြန်သွားပြီး PMO လိုပဲကျွန်တော့်ကိုပြန်မထားခဲ့ဘူး။ ယခု ၁ လနှင့်ရက်အနည်းငယ်အပို (စုစုပေါင်း ၃ လအပေါင်း) ကျွန်ုပ်သည်စိုက်ထူခြင်းကိုအနည်းဆုံး ၉၀% ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ၈၀% ရှိခဲ့သည်။ ငါနူးညံ့သောအချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်မြင်ကွင်းတစ်ခုတွင်နမ်းနေခြင်းကိုကြည့်ရှုသောအခါ (ပုံမှန်ညစ်ညမ်းမှုများတောင်မှပင် b1 မဖြစ်နိုင်ပါ) ကျွန်ုပ်စိတ်လှုပ်ရှားရန်အတွက်ခဲယဉ်းသည်။
အခုငါရောဂါပျောက်ကင်းပြီလို့ယုံကြည်ခဲ့ပေမယ့်ငါအပတ်တိုင်းတိုးတက်လာလို့ငါသံသယရှိတယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်၏ရည်မှန်းချက်မှာ ၆ လထိရန်ဖြစ်သည်။ ငါ 6% ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ ငါ relapse ရှောင်ရှားရန်သည်းခံစိတ်တည်ဆောက်ကြပြီးကာကွယ်တားဆီးရေးအားဖြင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကိုသာအီးမေးလ်များစစ်ဆေးရန်နှင့်အိမ်အလုပ်လုပ်ရန်နှင့် espn100 ကိုစောင့်ကြည့်ရန်အတွက် PC ကိုသုံးရန်သာအသုံးပြုပါ။
ငါကြီးစွာသောအစားအစာအစီအစဉ်အပေါ်ဖြစ်ကြောင်းကိုဒါကြောင့်ငါသည်လည်းကူညီပေးသည်အလောင်းအစား။ ငါဖြည့်စွက်ဆေးလုနီးပါးပေမယ့်ငါ့တိုးတက်မှုနဂိုအတိုင်းဖြစ်သေချာစေရန်အလို့ငှာတစ်ပါတ်အကြာတွင်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ နံနက်သစ်သားသည်မကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ဒီအရာအဖြစ်ဝေးငါစိုးရိမ်ပူပန်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ပါတယ် စိုးရိမ်ပူပန်နေသူအချို့အတွက်မူသင်လုံးဝအနားယူရန်လိုအပ်သည် - မိမိကိုယ်ကို b4 လိင်ဆက်ဆံရန်စိတ်ဖိအားမပေးပါနှင့်။
သင်ကြက်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ရာကိုနှစ်သက်စေရန်ကြိုးစားနေသည်၊ မိမိကိုယ်ကိုမလုပ်မိပါကစိုးရိမ်စိတ်ကိုလျော့နည်းစေသည်။ ငါအရမ်းခက်ခဲတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါအစောပိုင်းကပြproblemနာကလိင်ဆက်ဆံစဉ်ကာလတဝက်တည့်တည့်ဖြစ်တာ၊ ဒါကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကပြwasn'tနာမဟုတ်ခဲ့ဘူး၊ ဒါကတကယ်တော့ပြbecomeနာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်။ လူအချို့ကကြက်မကြီးကိုယ်ဝန်ရရန်ကြောက်ကြသည်။ သူတို့ကြောက်ရွံ့လိုသည့်အခါသူတို့နှင့်ကျိန်းသေလိုက်မည်။ ဦး ကအကောင်းမြင်တယ်။ ငါနောက်အပတ် update လုပ်ပါလိမ့်မယ်
သိသာထင်ရှားတဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတစ်ခု, ငါ့အောင်မြင်မှုကို nofap နဲ့မျှဝေဖို့လိုတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါ PIED မှပြန်လည်ကောင်းမွန်နေပြီးမကြာသေးမီကအထိအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့် (၆) နှစ်ကြာလက်ထပ်ခဲ့ခြင်းမရှိ။ သငျသညျမျိုး PMO နှင့်အတူအပေါက်ထဲသို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတူးစောင့်ရှောက်။ ကောင်းပြီငါမြို့သစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်ဤသပိတ်မှောက် Streak လှည့်ပတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အချို့သောမိန်းကလေးများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ လိင်ဆက်ဆံခဲ့သော်လည်း PMO မပါသည့်တစ်လနှင့်တစ်ပတ်အကြာတွင်အတုပြုလုပ်ရသည်။ (မိနစ် ၃၀ ခန့်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်) အော်ဂဇင်ကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးကျွန်ုပ်ပိုမိုတိုးတက်အောင်မြင်နေရသည်။ သင်တို့အားလုံးကိုလှုံ့ဆော်ရန်ကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်မှုကိုမျှဝေချင်သည်။ ငါ့အနေအထားရောက်နေပြီဆိုရင်ငါနဲ့အတူရှိနေမှာပါ။
90-ရက်ပေါင်း update ကို
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ခရီးနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးသတင်းကိုပြောပြချင်ပါသည်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းညစ်ညမ်းမှုမရှိ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှအော်ဂဇင်အနည်းငယ်မျှမရှိဘဲပြန်လည်စတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
အခုအားလုံးကောင်းလာပြီ။ ပထမ ဦး ဆုံးနေ့ရက်များငါစိုက်ထူရှိသည်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိဘဲအလွန်အမင်း horny ခဲ့ပေမယ့်ထို့နောက်ဤအရာအလုံးစုံပျောက်ကွယ်သွားခြင်းနှင့်ငါ flatline သို့ချော်။
ထိုအခါညအချိန်စိုက်ထူတဖြည်းဖြည်းပြန် လာ. ငါတစ်ခုတည်းစိုစွတ်သောအိပ်မက်သဘောပေါက်လာတယ်။
လွန်ခဲ့သော ၂ ရက်ကကျွန်ုပ်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုလုံးဝဖိအားမပေးဘဲထားခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည် Levitra ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ကိုဝန်ခံရန်လိုသော်လည်းကျွန်ုပ်မလိုအပ်ကြောင်းသေချာပါသည်။ သို့သော်၎င်းကကျွန်ုပ်အားယုံကြည်မှုအချို့ပေးသည်။
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်အချိန်၌ကျွန်ုပ်၌အပြည့်အဝအကျိုးမရှိခဲ့ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်အနည်းငယ်နှင့်အကူအညီအနည်းငယ်သာရရှိသောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်ခက်ခဲပြီးရေရှည်တည်တံ့သည့်အပြင်ကျွန်ုပ်တွင်အလွန်ကောင်းသောခံစားမှုများနှင့်လုံးဝဖိအားမရှိခဲ့ပါ။ ငါမတိုင်မီနှစ်ပတ်အကြာတွင်လိင်မဆက်ဆံခဲ့ပါ၊ ၎င်းကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကြာရှည်စွာနေနိုင်မည်မဟုတ်ဟုထင်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ရှည်လျားစွာတည်ရှိခဲ့ပြီးကျွန်မတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်အလွန်ကျေနပ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါစစ်တိုက်ဖို့ခဲယဉ်းသော porn အကြောင်းကိုအတွေးများရှိသည်ကြောင့်ငါစစ်မှန်တဲ့ rebooting နောက်ပိုင်းတွင်စတင်ထင်ပါတယ်, ငါဒီအတွေးများသို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်မရှိတော့ပါ။
ငါသည်ဤသူတို့၏ပြန်ဖွင့်ခရီးသွားဘို့သူတို့အားစိတ်ဝင်စားယုံကြည်မှုပေး go ရေးပါ။ ငါသည်ဤဖြစ်နိုင်နှင့်အမှုအရာတွေအများကြီးပြီးသားပိုကောင်းဖြစ်ကြသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
Reddit NoFap -5လအတွင်းအနည်းငယ်ငါ porn ကိုကြည့်ရပ်တန့်ကတည်းက
ငါစစ်ဆေးပြီးအမှုအရာကိုသွားခဲ့ကြသည်ကိုဘယ်လိုပြန်ကြည့်ဒီ subreddit သို့ရောက်ကြ၏။ fapstronauts ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားကြည့်ရှုရန်နှင့် ပို. ပင်ပျော်ရွှင်မိုးသည်းထန်စွာ PMO အလွဲသုံးစားမှု၏သက်ရောက်မှုဆြေးြေိံးတဲ့ကို TED ဟောပြောပွဲလည်းမရှိကြည့်ဖို့မင်္ဂလာ။
TED ဟောပြောချက်မှာသူတို့ကငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုပြောတယ်၊ သူတို့ဟာ ဦး နှောက်ရဲ့ပုံဖော်နှစ်တွေအတွင်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုမစတင်ခဲ့ဘူးတဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ဆန့်ကျင်တာကြောင့်အပြည့်အဝ reboot လုပ်ဖို့ ၅ လလောက်ကြာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။
ငါစိတ်ပျက်ခဲ့ပေမယ့် log in နှင့်ငါ့ကောင်တာစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ကျွန်တော် ၅ လကျော်ပြီ အဲဒါကကျွန်မကိုကြီးမားတဲ့ယုံကြည်မှုရိုက်ချက်တစ်ခုပေးခဲ့တယ်။ ငါကြိုက်နှစ်သက်သောမိန်းကလေးများနှင့်စကားပြောခြင်းကိုရှောင်ရှားခဲ့သည်။ အချိန်ကုန်လွန်လာသောအခါသူတို့စိတ်ကျေနပ်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုငါထင်သောကြောင့်။ ကျွန်ုပ်၏ရက်ပေါင်း ၉၀ ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည် M နှင့်မကြာခဏစတင်ခဲ့သည်၊ သို့သော် ၁ ရက်မှစ၍ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုဗီဒီယိုတစ်ခုမျှမတွေ့ရပါ။
ငါမရှိတော့ငါ malperformance ကိုကွောကျရှံ့ထဲကစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကိုမိန်းမများချဉ်းကပ်ဝံ့ပါ၏။ ဤသည်ငါ့အဘို့ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ဒီနေရာကိုရဖို့ငါ့ကိုအတော်လေးတစ်ဦးအနေဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
ငါသည်သင်တို့ကိုအခုမှစဆန္ဒရှိခြင်းနှင့်ကံအကောင်းဆုံးနှစ်လယ်ပိုင်း rebooters ။ မြက်ပင်သည်အမှန်စွဲ၏ဤဘက်မှာစိမ်းလန်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ငါအတိတ်5နှစ်များတွင်ရှိထက်ယခုတွင်ငါသည်ကိုယ်အကြောင်းကိုပိုကောင်းခံစားရသည်။
Reddit NoFap -ငါ Viagra ယူခဲ့မယ်ဆိုရင် Girlfriend ကငါ့ကိုမေးတယ်။ Post Porn ED
ငါ့ကိုဝေမျှချင်တယ်။ ပြီးတော့တခြားသူတွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။ လွန်ခဲ့သော ၇ နှစ်နှင့် ၇ နှစ်အတွင်းလိင်ဆက်ဆံရန်ကြိုးစားမှုအများစုကိုအသုံးချပြီးနောက်တွင်လိင်မှုကိစ္စပြုထားသော ED ကြောင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုမရရှိနိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်အသက် ၂၁ နှစ်တွင်ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံး (နှင့်ပထမဆုံးလေးနက်သော) ရည်းစားအသစ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ သူမနှင့်အကြိမ်အနည်းငယ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးပြီးမကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ ငါနှင့်ပတ်သက်သောအချိန်တိုင်းကျွန်ုပ်ရာထူးပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်နှေးကွေးခြင်းဖြစ်သော်လည်း cuming ကိုအာရုံမစိုက်တော့ပါ။ ငါမိနစ် ၄၀ ကျော်သွားပြီထင်တယ်။ သူမနောက်ထပ်မကြာနိုင်တော့သည့်တိုင်အောင်သူမ၏အော်ဂဇင်များစွာကိုပေးသည် (၀ န်ခံရန်လိုသည်၊ ကျွန်ုပ်၌ထိုအရာကိုသိမ်းထားရန်ခဲယဉ်းသည်) ။
ငါတို့ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါသူမကငါ Viagra (သို့) ဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုကိုယူခဲ့သလားလို့မေးခဲ့တယ်၊ အဲဒါကငါ့ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံး ED နဲ့ရုန်းကန်ပြီးတဲ့နောက်ကြားရတာတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ ငါက၎င်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသောယိုစိမ့်မှုကြောင့် cum ကိုမမြဲရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီးဖြစ်နိုင်သည့်အခါမလာရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
အဆုံးမှာတော့၊ ငါတို့ဟာနံနက်ခင်းမှာလိင်ဆက်ဆံတာကြာရှည်မခံခဲ့ကြဘူး၊ ငါလာခဲ့ပေမဲ့အခုငါရှိနေတဲ့နေရာကိုပျော်နေတယ်၊ ​​သူမငါ့ကိုအကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်မပြောဖို့ကြိုးစားနေတာငါလုံးဝအဆင်ပြေတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ငါပြောချင်တာက porn နဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့ဘယ်သူမဆို ED ကိုဒီဆေးကိုမမှီဝဲသင့်ဘူးလို့လှုံ့ဆော်ပေးတယ်။ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းရဲ့အဆုံးမှာအလင်းရှိတယ်။ ဒါ့အပြင်သင်ဒီမှာဒါမှမဟုတ်အဲဒီမှာပြန်လာရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမရိုက်ပါနဲ့။ အဲဒါကိုလက်ခံပြီးသင်ဖြစ်ချင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လမ်းကြောင်းဆီပြန်သွားပါ။
ငါအလားတူအတွေ့အကြုံရှိခဲ့ပါတယ်။ nofap ကိုစတင်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏မိန်းကလေးသည်ကျွန်ုပ်၏ဒစ်မည်မျှခက်ခဲကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်၊ ဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်တစ်ခါမျှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဖူးသောညတစ်ညတွင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ cum လုပ်နိုင်သည်။ ငါကြီးမားတဲ့အပြုသဘောဆောင်နှင့်သူမ၏ကောင်းသောခံစားရစေသော BJ ကနေပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အစဉ်အဆက်မှလာ။ ဖော်ပြထားခြင်းဖို့မ
ငါနော့ဖапအတွက်ကောင်းတယ်ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါလိင်အင်္ဂါမပြည့်စုံချင်ဘူးလို့တောင်မထင်ပါဘူး။ ကျန်းမာသောလိင်ဘ ၀ ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်, ကောင်းသောအလုပ်။
ထို့အပြင်သင်သည်စစ်မှန်သောလိင်မှုကိစ္စနှင့်အတူမိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်သင်ပြန်လည် ၀ င်ရောက်လာသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အတူအနားယူပြီးမိန်းကလေးနှင့်အတူအပန်းဖြေအနားယူရုံသာရှိလိမ့်မည် (ကျွန်ုပ်အတွက်တစ်နေ့လျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ cumming လုပ်ခြင်း၊ ၁၀ ကြိမ်ထက်မကကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူး)
ငါသဘောတူတယ်။ အရာမှာလိင်ဆက်ဆံခြင်းတွင်အော်ဂဇင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာခြင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်သည်အနည်ထိုင်ပြီးနောက်စိတ်ဓာတ်မကျပါ။ Fapping သည်တစ် ဦး တည်းရှိပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရတက်ကြွမှုမရှိပါ။ များသောအားဖြင့်သင့်အားမမှန်။ မကျေနပ်မှုများခံစားရစေပြီးမမှန်မကန်အရာများကိုကြာမြင့်စွာထားလေ့ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ (၄) ပတ်အတွင်းပြန်လည်စတင်သည်။ အသက် ၆၀ မှာငါဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးတစ်နေ့သုံးကြိမ်လောက်လုပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ဇနီးကလုံခြုံမှုကင်းမဲ့နေပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုရွံမုန်းနေတယ်။ ကျွန်တော့်ဇနီးကငါ့ရဲ့စွဲလမ်းမှုကိုကူညီပေးနေတာကိုရှာတွေ့ဖို့မျှော်လင့်ချက်လမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်သည်တောင့်တင်းသောသစ်သားရှေ့တွင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြင့်အလိုအလျောက်နှိုးဆော်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်နှစ် ဦး စလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးခဲ့သောအင်အားကြီးမားသောအချိန်နှင့်အနာဂတ်အံ့ဖွယ်ရာများကိုသိရှိနားလည်ခြင်း၌ပျော်မွေ့ခဲ့သည်။
အဘယ်သူမျှမ ED နှင့်အတူပထမဦးစွာတဦးတည်းညဥ့်ရပ်တည်ချက်
ငါရက် ၉၀ ပြီးပြီလို့ပြောသင့်တယ် ကျွန်ုပ်သည် ၂၃ နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၊ ယခင်ကအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်အခွင့်အရေးများစွာရှိပြီးအမြဲတမ်းစိုက်ထူရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ အမှုအရာပြောင်းလဲပြီပုံရသည် ကျွန်ုပ်သည်ပြproblemနာမရှိသောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ရုံသာမကအရက်အလွန်မူးနေသူလည်းဖြစ်သည်။ အရက်မူးနေရင်တောင်အရက်မူးပြီးပြgettingနာတက်တတ်တယ်။
ငါယုံကြည်မှုလျော့နည်းသွားတဲ့ပထမ ၃/၄ ဆက်ဆံရေးမှာ ED ရှိခဲ့တယ်။ ငါအသက် ၁၂ နှစ်အရွယ် မှစ၍ ၁၉ နှစ်အရွယ်ပထမ ဦး ဆုံးလိင်ဆက်ဆံစဉ်ကကျွန်ုပ်သည်မပြီးဆုံးသေးသောအချိန်ကတည်းကပင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်မွေ့လျော်နေခဲ့သည်။ ရှေ့သို့ ၂၅ သို့မြန်မြန်သွားပြီးကျွန်ုပ်၌တူညီသောပြproblemsနာများရှိနေသေးသော်လည်းအဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ Nofap မ Pornfree ကို3နှစ်ကြာလုပ်ခဲ့တယ်၊ ငါ့အရှည်ဆုံးရက် ၁၅၀ ဟာရက်ပေါင်း ၁၅၀ ဖြစ်ပြီး၊ Streak အတွင်းမှာကောင်မလေးရတယ်၊
လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အပျက်သဘောအတွေးများ bs - အမှိုက်ပုံးထဲမှထွက်လာခြင်း။ ခင်ဗျားဘယ်လိုပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတယ်၊
အာရုံခံစားမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုသည်လကဲ့သို့မကျဘဲနေကဲ့သို့ထသည်။ မိန်းကလေးများနှင့်စိုက်ထူခြင်း…။ Massive- ဆောင်းရာသီအ ၀ တ်အစားတွင်ရှိသောမိန်းကလေးများကိုစဉ်းစားနေစဉ်မိမိကိုယ်ကိုပင်သွေးဆောင်နိုင်သည်။ အလုပ်မလုပ်ခြင်း၊ ထွက်ခြင်း၊ အိပ်ဆောင်သန့်ရှင်းရေးကိုဂရုစိုက်ခြင်း၊ ရယ်မောခြင်း၊ ပြုံးခြင်း၊ ကလေးတစ် ဦး ကဲ့သို့အိပ်နိုင်ခြင်းနှင့်ကဖိန်းဓာတ်လှုံ့ဆော်မှုမရှိဘဲနိုးနိုးကြားကြားရှိခြင်း (ကျွန်ုပ်သည်အကျိုးရှိသောအရသာကြောင့်ကော်ဖီသောက်သော်လည်း)
ဤအရာအလုံးစုံသဟဇာတအကျိုးကျေးဇူးများကိုနှင့်တင်းကျပ်သော PMO abstinence အကြားဆက်စပ်မှုကိုလျစ်လျူရှုရန်၎င်း၏ခက်ခဲ။
၃၆ နှစ်အရွယ်အမျိုးသားအထီးကျန်။ ကျွန်တော့်ဇနီးကကျွန်တော့်ကိုစွန့်ခွာသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟာအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး၊ သူမနဲ့လိင်ဆက်ဆံချင်တဲ့စိတ်မရှိဘဲငါထွက်သွားချင်တာကိုကျွန်မတိုက်တွန်းခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ငါ PMO လှည့်။ ကောင်းပြီငါမေ့မေ့လျော့လျော့သို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထ။ အားလုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကနေခံစားခဲ့ရသည်။ ED ဆေးတွေတောင်မှအလုပ်လုပ်တော့ဘူး။ ငါ့ဘဝကစို့နေပြီ။ ငါစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့ပေမယ့်ငါပြonနာအပေါ်ငါ့လက်ချောင်းတင်ဘယ်တော့မှနိုင်ဘူး။ အလည်အပတ်ခရီးစိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်များနှင့်ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကု။ ဘယ်သူမှအဖြေမရခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့်တခြားသူတွေကိုငါနဲ့တူတဲ့သင်္ဘောတစ်စင်းမှာတွေ့တဲ့အခါသူကကျွန်တော့်ကိုအုတ်တစ်တန်လိုနှိပ်စက်တယ်။ ငါစွဲလမ်းခဲ့သည်ချက်ချင်းသိတယ်။
ဒီနေ့မြန်မြန်ရှေ့သို့ ဒီနေ့ PMO ၏နေ့ ၃၈ သည်ယနေ့ဖြစ်သည်။ ငါ့မိတ်ဆွေတို့၊ ဤဖြစ်စဉ်သည်အမှန်တရားဖြစ်သည်။ ငါ့ဘဝဟာစိတ်ကူးစိတ်သန်းတိုင်းမှာပြောင်းလဲသွားတယ်။ အဆိုပါမြူရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်နှင့်ငါက၎င်း၏ရယ်စရာအာရုံစူးစိုက်တယ်။ စိတ်ဓာတ်ကျစရာအကြောင်းမရှိတာ၊ စိုးရိမ်ပူပန်စရာတွေမရှိတော့ဘူး၊ တေးဂီတကအသံပိုကောင်းလာတယ်။ ငါဒါတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူမလုပ်နိုင်ပေမဲ့အဆုံးရလဒ်ကအံ့သြစရာကောင်းတာကဒီအရာအားလုံးကိုမင်းကိုပြောပြချင်တယ်။ ကျွန်တော့်ရည်မှန်းချက်ကရက်ပေါင်း ၆၀ တောင်မရှိသေးဘူး။ အားတင်းထားသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးမှုကကျွန်ုပ်အားပြန်လည်အသက်မရှင်ရန်တားဆီးထားသည်။ ရရန်ထိုက်တန်သောအရာသည်လွယ်ကူပြီး၎င်းသည်ခြွင်းချက်မဟုတ်ပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုယုံကြည်ပြီးသင်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ပါလိမ့်မည်။ ငါကတိပေးတယ်။
(ထင်မြင်ချက်များ - ပုံမှန်ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည့်လိင်မှုအတွေ့အကြုံများစွာရှိသောအသက်ကြီးသူ)
LINK - အများဆုံးမျက်နှာစာပေါ်အောင်မြင်မှုအတွက်ခက်ခဲ reboot,3ရက်သတ္တပတ်
ဒီမှာအသက် ၃၀ ရှိပြီ၊ ငါဟာအောင်မြင်တဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်နဲ့ရေးသားနေပြီးတခြားသူတွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ မင်းတို့ငါ့သမိုင်းနဲ့မင်းကိုငါမုန်းလိမ့်မယ်၊ Daily M နှင့် P စောင့်ကြည့်ခြင်းသည်အိပ်ရာထဲမှပြproblemsနာများ၊ ခက်ခက်ခဲခဲနေခြင်းမှသည်၎င်းကိုနှောင့်နှေးနေသော Os သို့ပင်အိပ်စက်ခြင်းအထိဖြစ်သည်။ ငါသာအမြဲတမ်းရည်းစားရှိပြီးငါအများကြီး P. ကြည့်ရှုမခံခဲ့ရသည့်အချိန်မှလွဲ။ ငါ့အသက်ကိုအများစုအဘို့ဤပြproblemsနာများရှိခဲ့ပါတယ်
လောလောဆယ်ငါမိန်းကလေးနှစ် ဦး ချိန်းတွေ့နေပါတယ်, ဒါကြောင့်ဒီမိတ်ဖက်များနှင့်အတူပြန်လည် boot ဖြစ်ပါတယ်။ လိင်သည်မိန်းကလေးတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်တစ်ပါတ်လျှင်တစ်ကြိမ်သာနေ့စဉ် PMO အချိန်ကာလဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ ပတ်ကငါအရမ်းခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့တယ်၊ နောက်ဆုံးတော့ငါ့ကိုနှိပ်ပါ YBOP ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုစစ်ဆေးပြီးချက်ချင်းရှောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အမှန်တကယ် P. ကိုကြည့်ခြင်းကဲ့သို့အန္တရာယ်ရှိသည့်ရံဖန်ရံခါစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမှအပပထမအပတ်ကကောင်းမွန်ခဲ့သည်။ တစ်ပတ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီး O သည်လုံးဝမဟုတ်ပါ။ ကောင်းပြီ၊ ငါဟာအရမ်းခဲယဉ်းပြီးနီးကပ်စွာလိင်အင်္ဂတေကိုသုတ်သင်ပစ်ခဲ့တယ်။ တစ်ကြိမ်သာ
ရက်ပေါင်းတစ်စုံတွဲအကြာတွင်ကျွန်ုပ်၏သည်အခြားမိတ်ဖက်အတူရှိ၏နှင့်အတူတူပင်ပြဿနာများကိုပြန်ရောက်လာတယ်။ ငါနေသမျှကာလပတ်လုံးငါတတျနိုငျသအဖြစ်များအတွက်ရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုအပ်သိတယ်။ ငါကကူညီပေးခဲ့ထင်ထားတဲ့ M ကိုအတူပြန်ရောက်သွားတယ်ဒုတိယရက်သတ္တပတ်၏အဆုံး, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမ P သို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်။ ကောင်းပြီငါကြီးမြတ်ခံစားရ3ရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်နံနက်သစ်သားပြန်လာပြီးမှ စတင်. သည်ငါတကယ်အစစ်အမှန်လိင်နှင့်အစစ်အမှန်အမြိုးသမီးမြားအားဖြင့်ဖွင့်နေပါတယ်နှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ (45-60 မိနစ်ပို်ထင်) အမျိုးသမီးတစ်ဦးပြီးမြောက်ရန်အတွက်လုံလောက်သောခက်ခဲရှည်လျားနေဖို့နိုင်ပါတယ်။ ငါစုစုပေါင်းအကြီးခံစားရသည်။
တချို့ကအမှုအရာကြောင့်သို့မဟုတ်ကူညီပေးခဲ့မပြုစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်။ ငါအမိုင်နိုအက်ဆစ်နှင့်အတူချောက်ချားဂျင်ဆင်း, Multi-ဗီတာမင်, ငါးရေနံနှင့်ပရိုတိန်းနှင့်အတူဖြည့်စွက်စတင်ခဲ့သည်။ ငါသူတို့အရေးကြီးသောအမိုင်နိုအက်ဆစ်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအသစ်တဖန်မွေးဖွားကူညီဖတ်ပါ။ ငါသည်လည်းအရေပြားကိုပျော့ပြောင်းနှင့် sensitivity ကိုပြန်ပို့မည့်အမှုမှာအခေါင်းပေါ်မှာ moisturizer နှင့်ရိုးတံအပေါ်ပါးရိုက်လိမ့်မယ်။ ငါသညျဤအပေါငျးတို့သညျငါ့ကိုပိုမြန် recover ကူညီပေးခဲ့သည်ခဲ့ကြပေမည်ထင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ငါ၏အဒစ်ပြန်လာသော sensitivity ကိုအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုးဖောက်မှုပြီးနောက် masturbate ရန်ရှိသည်ထက်, အင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံသောအခါငါတကယ် ejaculated နိုင်ပါတယ်။
LINK - မေလ 20, 2012 thomaslewis
ဟေးလွယ်တယ်။ ဤမျှလောက်မရိုက်နှက်ပါနှင့်နှင့်သင်၏ **** ပုံမှန်ပုံမှန်သူငယ်ချင်းဖြစ်လာလိမ့်မည်။
သငျသညျဤအသက်ရှင်သောအသက်ရှူဥပမာအားပြောနေတာပါ။ လိင်မှုကိစ္စအတွက်ခြေရာခံဖို့စွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲလမ်းခဲ့ဖူးတယ်။ ဘယ်လောက်ရှက်စရာကောင်းလဲဆိုတာမင်းမသိဘူး။ ထိုအခါငါတစ်လခွဲတစ်လ porn ကိုကြည့်ရှုနိုင်ဘူးတဲ့အခြေအနေမျိုးသို့ရ။ , ဖြစ်စေခြင်းငှါရိုက်နှက်နိုင်ဘူး။ ငါအခွင့်အလမ်းအဖြစ်ယူ။ ခဲလင်းနို့။ ငါကတစ်လနှင့်တစ်နှစ်ခွဲကာလ၌3ကြိမ်တူလုပ်ခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ HOLYYY SHOOTTT သည်အစိုင်အခဲစိုက်ထူမှုကိုနှိုးထခဲ့သည်။ ဒါဟာနောက်တဖန်ဟောင်းသောနေ့ရက်ကာလကဲ့သို့ဖြစ်၏ !! ငါ့စွမ်းအင်အားလုံးကိုအဲဒါကိုပြန်ချအောင်လုပ်ဖို့ငါအာရုံစိုက်ရလိမ့်မယ်။ လူသား !! ငါသည်ငါ့ဘဝကို OVERRRR ခဲ့သည်ထင် !!! ထိုအခါငါရိုက်နှက်ခြင်းနှင့်အင်တာနက် porn ကိုကြည့်တော့ဘူး
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အဆင်ပြေသည်ဟုဆရာဝန်များကပြောဆိုကြသည်။ အမှန်မှာ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အဆင်ပြေသည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းကိုနောက်ဆုံးအခြေအနေအရရွေးချယ်သင့်သည်။ သင်ရိုက်နှက်သောအခါ၊ သင်၏လိင်စွမ်းအင်ကိုလျော့နည်းစေသည်၊ ၎င်းသည်သင်၏ဘ ၀ ၏ကဏ္ aspects များစွာသို့စီးဝင်သွားစေသည်။ buddy ရဲ့အဖေကအမေရိကန်ပိုင်မှာပြောလိုက်သလိုပဲ "ဒါကဂိမ်းမဟုတ်ဘူး"
ငါ ၄၅ နှစ်ရှိပြီ ငါပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလပတ်လည် PMO အအေးကြက်ဆင်ကန်။
ခင်ဗျားပြောတာက "ကျွန်မရဲ့လိင်မှုဘ ၀ မှာကွာခြားချက်ကသိသိသာသာဖြစ်ခဲ့တယ်။ ၁၂ နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ငါမထိတွေ့ဘဲရေရှည်တည်တံ့တဲ့စိုက်ထူမှုတွေရခဲ့တယ်။ နောက်တဖန် ၁၆ လိုခံစားရတယ်!”
ငါအတော်လေးတူညီသောခံစားချက် 16 မဟုတ်ပေမယ့် 21 lol ဖြစ်ကောင်း lol ခံစားရတယ်။ ငါပြန်မလာသေးပေမယ့်ငါ့ရဲ့စွမ်းအားစွမ်းအားကိုတော်တော်လေးပြင်းပြင်းထန်ထန်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဝန်ခံလိမ့်မယ်။ ငါလုံးဝသေပြီခံစားရငါ flatline ရှိရာကာလကိုတွေ့ကြုံခံစား။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှုပ်ထွေးမှုမပေးဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမစဉ်းစားမိဘဲအသက် ၂၀ ကျော်နေပြီလို့ခံစားမိတဲ့အချိန်တွေများတယ်။
ငါမိန်းမတွေကိုကယ်တင်လိမ့်မည်ဟုကိုယ့်ကိုယ်ကိုကတိပြုခဲ့သည်။ ငါမှာအဲဒီမှာ GF တည်ငြိမ်မှုမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်တစ်ခုခုလုပ်မိတဲ့အခါငါအလံကိုမြှင့်နိုင်မလားဆိုတာကိုတော့ငါစိတ်ပူမိတယ်။ တစ်ယောက်တည်းငါ့ကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တွင်စောင့်ရှောက်။
ငါ reboot လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ကတည်းကငါတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသို့မဟုတ်ကြည့်ရှုကြပြီမဟုတ်။ ငါငါ့ကိုအသစ်နှင့်အတူအလွန်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။
၎င်း၏ခဲ့3လအတွင်း
ငါလွယ်လွယ်ကူကူခက်ရ wouldnt ရှိရာကြိမ်ရှိသည်ဖို့သုံးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ဝန်းကျင်3months ago စတင်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို nofap bullshit ခဲ့သည်ထင်။ ယခုငါ Ive အစဉ်အဆက်ကြုံတွေ့ခံစားအခက်ခဲဆုံးစိုက်ထူရ။ အကြှနျုပျ၏ဒစ်ကြီးမားခံစားရငါ့ porn စွဲရပ်တန့်ကောင်းသောခံစားရတယ်။ ကတော့ခိုင်မာနေဆဲမယ်, ဒီရုံအစအဦးပါ!
နေ့ 27 ED အစီရင်ခံစာ
ကောင်းပြီ၊ ဒါကငါလုပ်ဖူးသမျှထဲမှာအဝေးဆုံးပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့လကငါဆေးလိပ်သောက်ပြီးပူပြင်းတဲ့ရည်းစားအသစ်ကိုစတင်တွေ့မြင်ခဲ့တယ်။ ဒါက nofap နဲ့ပတ်သက်တယ်လို့မထင်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့် ED တိုးတက်မှုကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ငါဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအပြည့်အ ၀ မကျေနပ်သော်လည်း၊ ငါဒီမှာလက်တွေ့ဖြစ်ဖို့လိုတယ် အတိတ်ကမိန်းကလေးများအတွက်ခဲယဉ်းစွာခဲယဉ်းနိုင်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ အခုငါလိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါငါအရမ်းခက်သွားပြီ၊ ဒါကငါ့အတွက်များစွာသက်သာမှုပါ။
PE နဲ့ငါဆက်ဆံတာဖြစ်နိုင်တယ်မဟုတ်လား။ ငါ fapping မဟုတ်ပေမယ့်ငါလိင်ဆက်ဆံတာတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ ဒီမနက်မှာငါလိင်ဆက်ဆံပြီး PE ကတော်တော်ဆိုးတယ်။ ငါသာမိနစ်အနည်းငယ်ကြာခဲ့သည်။ လိင်သော်လည်းမယုံနိုင်စရာခံစားရပါတယ်။ ငါနင့်ကိုအမြဲတမ်းသတိရနေစေခဲ့တာပဲ။ ငါရယ်စရာကောင်းလောက်အောင်ကြီးမားတဲ့ဝန်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိပြုမိလိုက်တယ်။
ငါ့အတွက်အကြီးမားဆုံးအရာကတော့ငါသူမအတွက်ကြိုးစားရုန်းကန်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ငါအရမ်းစိတ်ပူခဲ့တယ်။ ငါကခွင့်ပြုချက်ယူပြီးတစ်ခါတစ်ရံကြုံတွေ့ရသည့် PE ကိုအာရုံစိုက်တော့မည်ဖြစ်သော်လည်း nofap မစတင်မှီကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံရန်ခက်ခဲခြင်းကိုတောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်တော်သေချာပေါက်ဤအချက်ကိုစွဲစွဲမြဲမြဲဆုပ်ကိုင်ထားရန်လိုအပ်သည့်အားပေးမှုအားလုံးဖြစ်သည်။ မျှော်လင့်ချက်ကဆက်ပြီးတိုးတက်နေလိမ့်မယ်။ ED လိင်ဆက်ဆံမှုကိုပျက်စီးစေတဲ့ ED နဲ့ငါထပ်ခါထပ်ခါဆက်ဆံစရာမလိုတော့ဘူး
porn နှင့်ရံဖန်ရံခါ FAP အဘယ်သူမျှမ
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ လူတော်တော်များများမလုပ်ပေးတဲ့အရာတစ်ခုကို ၀ င်ပြီးငါ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြချင်တယ်။ နောက်ခံအကြောင်းအရင်းအချို့ - ကျွန်ုပ်သည် ၂၇ နှစ်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၌ gf တစ်လုံးသာရှိသော်လည်းကျပန်းလိင်ကြင်ဖော်ဘက်များများစားစား။ ကျွန်ုပ်သည်ကတိကဝတ်ပြုခြင်းတွင်ကြီးမားသည်မဟုတ်။ ငါ ED လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကရှိခဲ့ပေမယ့်တစ်နည်းနည်းနဲ့ချွတ်လှုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ လိင်ကိစ္စ၌ကျွန်ုပ်၏ပြသနာသည်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အမြဲတမ်းအော်ဂဇင်မဖြစ်နိုင်ပါ။ မိန်းကလေးတစ် ဦး ထဲအကြိမ်အနည်းငယ်သာရောက်ခဲ့ဖူးသည် (ကျွန်ုပ်မဖြစ်နိုင်ဟုယူဆသောကွန်ဒုံးမရှိခဲ့ပါ)၊ ထိုအချိန်ကကျွန်ုပ်မသိသောအခြားပြနာတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်သည်လိင်တစ်ခွင်လုံး၌ ၁၀၀% ခက်ခဲစွာမနေခဲ့ပါ၊ သို့သော်ထိုအချိန်က၎င်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်ဟုထင်ခဲ့သည်။
ငါဖြေရှင်းချက်သည်ပုံမှန်လိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် (မိန်းကလေးခေါ်) ကိုရှာခြင်းဖြစ်သည်ဟုထင်ပြီးမိတ်ဆွေကောင်းတစ် ဦး ကလွန်ခဲ့သော ၂ လခန့်ကကျွန်ုပ်အားပြသခဲ့သည်။ ငါဘယ်တုန်းကမှညစ်ညမ်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်မဖြစ်ခဲ့တာလဲ၊ ဒါကြောင့်သူ့ကိုစွန့်ပစ်လိုက်တာကလွယ်လွယ်လေးပါ။ အခု ၂ လလောက်သန့်ရှင်းတယ်။ 🙂ဒါပေမဲ့ NoFap လမ်းကိုငါကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ငါလမ်းလျှောက်သွားသောမည်သည့်မိန်းကလေးမဆိုသာဝင်လိုသည့်နေရာ၌ကျွန်ုပ်ရသည့် ဦး နှောက်မြူလွန်းခြင်းကကျွန်ုပ်၏အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုထိခိုက်သောအချက်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်လိင်မှုကိစ္စပြုခဲ့လျှင်၎င်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်သေချာပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည်မဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်သည်တစ်ပတ်လျှင်အများဆုံး ၂ ကြိမ် faps နှင့်ဘယ်တော့မှညစ်ညမ်းခြင်းကိုမမှီဝဲပါ။
ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုငါ့မိန်းကလေးငယ်တဦး (ကျနော်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုစတင်ခဲ့ကတည်းကပထမဦးဆုံးလိင်) နဲ့တစ်ဦး3နေ့က fuck ဆိုတဲ့မာရသွန်ချွတ်လက်စသတ်ခြင်းနှင့်ရလဒ်အတွက်နေသောခေါင်းစဉ်:
1) ငါခက်အစာရှောင်ခြင်းအရနှင့်လုပ်ရပ်ပြုသည်အထိအပြည့်အဝခက်ခဲနေဖို့။ ငါပျောက်နေသည်သို့မဟုတ်ဘယ်လောက်ခက်ခဲငါရနိုင်အရာကိုအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးခဲ့!
2) ယခုတွင်ငါသည်ငါ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူအတွင်းပိုင်းနှင့်အတူတကွအော်ဂဇင်နိုင်, မည်သည့်အနေအထားတွင် ... ဟုတ်ကဲ့ပင်ကွန်ဒုံးနှင့်ပင်။
၃။ လိင်ဆက်ဆံပြီးတဲ့နောက်မှာမြန်မြန်ပြန်ကောင်းလာပြီးစိတ်ပိုင်းရော၊ ကာယပိုင်းရောပါသွားဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။ အရင်တုန်းကငါနဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးတဲ့လူကိုအချိန်တိုအတွင်းမှာအရာဝတ္ထုတွေပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာသည်အထိမုန်းခဲ့တယ်။ အရမ်းထူးဆန်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဝမ်းသာတယ်၊
ဒါကြောင့်သင်အဲဒီမှာသွားပါ။ ငါကောက်ချက်မချနိုင်သေးဘူး၊ ဒါပေမဲ့ငါ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဝေမျှဖို့နဲ့ငါ့လိုပန်းတိုင်တွေထားဖို့တစ်ယောက်ယောက်ကိုကူညီမယ်လို့ငါထင်တယ်။
ငါ့အဘို့သကဲ့သို့, လာမယ့်ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူပုံမှန်လိင်ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်၎င်းတို့အပေါ် faps ခုတ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကောင်းတဲ့မိန်းကလေးရှာဖွေတာဖြစ်ပါတယ်။
ရေကျော်ငါသည်ငါ့ ED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနေသည်ထင်
NoFap ကလမ်းပဲ။ ငါ NoFap ကို Hard-mode မှာလုပ်နေတယ်။ အဓိကအကြောင်းပြချက်က ED ပြproblemsနာတွေပါ။ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခွဲလုံးလုံးလိင်ဆက်ဆံရန်သုံးကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ဖူးပြီး၊ အလယ်အလတ်အောင်မြင်သောအခက်အခဲတစ်ခုရှိခဲ့သည်။
မနေ့ကငါမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံပြီးပြproblemနာမရှိဘူး။ ငါလာတဲ့အချိန်မှာကွန်ဒုံးပေါက်ကွဲလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနည်းငယ်စိုးရိမ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ကံကောင်းထောက်မစွာတော့အဲဒီလိုမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ :) ဒုတိယအကြိမ် DE ပြသနာအချို့ရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါက OK ကိုခန့်မှန်း။
ကိုယ့်ကိုသင်ယောက်ျားတွေနဲ့ငါ့အနည်းငယ်သာအောင်မြင်မှု-ပုံပြင်ကိုမျှဝေချင်တယ်။ ခိုင်ခံ့ horny နေဖို့
ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်အများကြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာငါ့အနောက်ဆုံးဘလော့ entry ကိုကတည်းကနီးပါးသုံးလဖြစ်ခဲ့သည်။
ပထမဦးစွာငါ Marnia အားဆင့်ဆိုရမည်မှာရန်ရှိသည်, လူအပေါင်းတို့သည်အခြားအဖွဲ့ဝင်များ: Thanx, သင့်ထောက်ခံမှုငါ့ထံသို့တွေအများကြီးကိုဆိုလိုသည်နှင့်ဒုတိယ: Reboot ယောက်ျားတွေအလုပ်လုပ်!
သင်လိုအပ်သမျှသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောအဖော်၊ ယုံကြည်မှုနှင့်သည်းခံခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်နှင့် gf PMO စွဲလမ်းမှုကိုအတူတကွရပ်လိုက်ခြင်း၊ ဖုန်းဆက်ခြင်းမှထွက်ခွာခြင်း၊ ရလဒ်? ကလေးကလမ်းလျှောက်နေတုန်းကျွန်မတို့နှစ်လအတွင်းလက်ထပ်လိုက်ပြီ။
ပြနာများလား။ ကောင်းပြီ, ယောက်ျားတွေ reboot ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီးယုံကြည်မှုရဖို့အချိန်ယူပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောအပတ်ကကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ၀ င်ရောက်ပြီး“ ဒီကင်ဆာရောဂါကဘာလဲ၊ ဒါကစစ်မှန်တဲ့လိင်မဟုတ်တာ၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဘာလိုအပ်လဲ” လို့စပြီးစဉ်းစားမိခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအခါငါ site ကိုမှသွား။ , porn blocker (MetaCert) ကိုတပ်ဆင်, လူသည်အားနည်းနေခြင်းနှင့်စွဲအနိုင်ရဖို့ "တစ် ဦး တည်းသာကြည့်" အခြေအနေရှောင်ရှားရန်အကူအညီလိုအပ်နေသည်။ တစ်နေ့၊ လိင်တစ်နေ့လုံးမှတ်မိတယ်၊ ငါ ၁၃ ကြိမ်ရိုက်ခဲ့တယ်လို့ထင်တယ်။ တစ်ခါတလေအတွေးတွေက“ ထလာမှာလား” မျက်နှာပြင်ပေါ်ထွက်လာပေမယ့်သူတို့ကအသည်းအသန်လိင်အတွက်အငွေ့ပျံ။
ရက်အနည်းငယ်အကြာ, ငါသည်နံနက်အချိန်၌ငါတက်ရ couldnt ညဉ့်အခါအံ့သြစရာလိင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ငါဖြစ်ကောင်းငါလိင်ငါလုပ်ပေးရန်ရှိသည်တစ်ခုခု, ငါမဟုတ်ပွုတျောမူသော, လုပ်ဆောင်ရန်ရှိသည်တဲ့အလုပ်တခုကိုခဲ့ခံစားရတယ်, ဖြစ်ကောင်းငါ့ဦးခေါင်းသည်မင်္ဂလာဆောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖိအားအပြည့်အဝဖြစ်ပါသည်, နေ့တိုင်းမျိုးစုံလိင်ကနေကုန်ခဲ့သည်။
လိင်သည်အပန်းဖြေခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ အလုပ်တစ်ခုနှင့်ပြန်လည်ပြသခြင်းသည်အချိန်ယူရသည့်အချိန်နှင့်မတက်တော့ဘဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုသာဖြစ်သည်၊ သို့သော်အဓိကအချက်မှာ REBOOT WORKS ။
NOFAP 27 နေ့ရက်များထဲမှာ
ဟေးကောင်တွေ NOFAP lol ရဲ့အမြဲတမ်းကြီးထွားလာနေတဲ့သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနအသိုင်းအဝိုင်းကိုငါကူညီမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ် ငါလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်မိန်းကလေးများနှင့်အတူ ED ကြုံတွေ့နှင့်ပြင်းထန်နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်သောကြောင့်ငါဤသို့တယ်။ ငါပြင်းပြင်းထန်ထန်သေခြင်းတရားချုပ်နှောင်ထားနှင့်အတူပိတ်ဆို့လျှင်ငါ cum တော်တော်များများနိုင်, ကောင်မလေးတစ်ယောက်ထဲကိုထွက်သွားတာဟာမဖြစ်နိုင်ဘူး။
ငါတကယ်ချစ်စရာဂျပန်မိန်းကလေးနှင့်အတူရှိခဲ့သည့်အခါဤအပေါ်တစ် ဦး ကိုင်တွယ်ရတဲ့အဘို့အကြှနျုပျ၏အစမှတ် ငါ့မှာအရင်ကတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါသူ့ကိုနမ်းဖို့စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမခက်တော့ဘူး။ ငါ porn အကြောင်းစဉ်းစားခဲ့ရတယ်, သူမငါ့ကိုစီးနင်းသကဲ့သို့ငါပဲအကောင်းဆုံးပျော့ခံစားရတယ်။ ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲတွင်ရှိသောကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုအော်ဟစ်နေသကဲ့သို့ - wtf သွားနေသည် ??? ဒါပေမယ့်ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး။ သူမကစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးလိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်အနာဂတ်တိုးတက်မှုကိုခုခံတွန်းလှန်ခဲ့တယ်။
အဲဒီနောက်မှာငါဟာတခြားသူတွေမှာငါနဲ့အတူတူပြmeနာတွေရှိ၊ မရှိ YBOP ကိုရှာပြီးဒီအသိုင်းအဝိုင်းကိုစဖတ်ခဲ့တယ်။ ငါလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ ဒါက ၂၇ ရက်ပဲရှိသေးတယ်။ ငါ့ရဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုငါပယ်ဖျက်လိုက်တယ်။ ကစားစရာတွေအားလုံးကိုလွှင့်ပစ်လိုက်တယ်။
ဤတွင်ကျွန်မနောက်ဆုံး4ရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်ဒါစဉ်အတွင်းသတိပြုမိသောအရာတို့ကိုအချို့နေသောခေါင်းစဉ်:
ရက်သတ္တပတ် ၁: - ပထမရက်အနည်းငယ်၊ သင်အမှန်တကယ်မစဉ်းစားနိုင်ပါ၊ 1-4 ရက်မြောက်နေ့ - သင် porn လိုချင်တပ်မက်ခဲ့သည် - သို့သော်နူးညံ့သိမ်မွေ့။ ၎င်းကိုသင်တွန်းလှန်နိုင်သည်
သီတင်းပတ် ၂ - စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းစတင်သည်။ သင်အထီးကျန်နေပုံကိုစဉ်းစားသကဲ့သို့၊ သင်ဘဝရှိလိုသည့်နေရာတွင်မဟုတ်သကဲ့သို့ - သင်သည်သင်၏ porn ကိုအမှန်တကယ်ကြည့်လိုခြင်းစတင်သည်။ ကျွန်ုပ်ရက်တစ်ဝက်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူကုန်ဆုံးသကဲ့သို့ PMO ကိုလိုချင်ပေမယ့်တကယ်ပဲ NOFAP ကိုတွန်းလှန်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ မင်းရဲ့ယောက်ျားတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုငါဖတ်ပြီးငါနဲ့ဆင်တူတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါကဝေးဝေးနေဖို့အားပေးတယ်လို့ခံစားမိတယ်။ ငါ ၁၂ ရက်ဒါမှမဟုတ်ဒီ ၁၂ ရက်လောက်မှာငါ့ရဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။ ဒါကကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းပဲ။ ဒါကပျောက်သွားပြီ၊ မင်းပြန်မရနိုင်ဘူး) - ငါစိတ်ဓာတ်ကျတာကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်အတွက်ရည်မှန်းချက်တွေချမှတ်ပြီးငါ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။
သီတင်းပတ် ၃ - ငါတော်တော်စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါအားကစားရုံကိုသွားပြီးအလုပ်ကိုအာရုံစိုက်ခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ပစ္စည်းတွေကိုလေ့လာတာ၊ အချိန်ဖြုန်းတာထက်အလုပ်လုပ်တာပိုကောင်းတယ်။ - ငါသည်လည်း Meetup.com ကို အသုံးပြု၍ လူသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်ပါတီများရှာဖွေခြင်းကိုပိုမိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ - ကျွန်ုပ်သည် Starbucks တွင် (အိမ်တွင်း၊ အလွတ်တန်းမဟုတ်ဘဲ) တွင်ပိုမိုအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်လူများ၏ပတ် ၀ န်းကျင်၌ နေ၍ အထီးကျန်နေခြင်းမဟုတ်ဟုခံစားရသည် - ကျွန်ုပ်သည်အွန်လိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများကိုပိုမိုအလေးအနက်ထားစပြုခဲ့သည် (ပထမငြင်းပယ်မှုအနည်းငယ်ကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းမပြုမီ) - ကျွန်တော့်ဂိမ်းကပိုကောင်းသလိုပဲကျွန်တော်တော်တော်များများလွင့်ထွက်သွားခဲ့ပေမဲ့ငြင်းပယ်ခံရခြင်းကိုကျွန်ုပ်အားအဆင့်ဆင့်မပေးခဲ့ဘဲနောက်ဆုံးမှာတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Semi- ချစ်စရာမိန်းကလေးတွေဆီကနံပါတ် ၂-၃ ရခဲ့တယ်။
ရက်သတ္တပတ် ၄ - ငါဟာခက်ခဲတဲ့အရာတွေနဲ့နေ့တိုင်းထနေတယ်။ ငါ MO ကိုစိတ် ၀ င်စားသည်ဟုခံစားရသော်လည်းကျွန်ုပ်မခံစားရပါ။ သို့သော်ထိတွေ့ခြင်းကိုခုခံတွန်းလှန်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ သို့သော်၎င်းကိုအပြည့်အဝအနားယူခြင်းမှရှောင်ရှားနိုင်သည်။ တစ်ခုခုသာဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်မည်မျှကြည့်ကောင်းသည်ကိုလေးစားမိသည်။ ငါ၌စနေ၊ တနင်္ဂနွေအတွက်တန်းစီရက်များစွာရှိသည်။ သို့သော်ငါကိုင်ငံလိုလိုလို၊ မိန်းကလေးများကိုလိင်ဆက်ဆံရန်အလွန်အမင်းလိုအပ်နေခြင်းကြောင့်ကြောက်လန့်နေသလိုခံစားရတယ် - ငါတကယ်လိင်လိုချင်တယ်၊ ငါတင်ရင်တော့ငါဂရုမစိုက်ဘူး။
ယခုငါသည်လေးနက်သော DRON BRO နှင့်တူသည်။ ကျွန်ုပ်တစ်ယောက်တည်း (သို့) အလုပ်တစ်ခုမရှိလျှင်ငါ့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောအရာများကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ရနိုင်မည်နည်း။ Hard Mode အကြောင်းပြောဆိုပါ။ - ရလဒ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်အလွန်စွဲစွဲမြဲမြဲရှိနေပြီးအမှန်တကယ်ရက်စွဲများကိုသာတွန်းအားပေးနေသည် - အနည်းဆုံးတစ်ညဖြစ်သည်။ အခုထိငါချိန်းတွေ့တာတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်ကောင်မလေးက RL မှာသိပ်ပြီးဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူး။ လာမည့်အချိန်၌ကံကောင်းပါစေ? အရမ်းရယ်ရတယ် .. - ငါလည်းတစ်နေ့တာမှာမိန်းကလေးတွေကိုပိုပြီးချဉ်းကပ်နေတယ်၊ ​​Starbucks မှာမိန်းကလေးတွေဖွင့်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ကုန်တိုက်ကြီးတစ်ခုမှာ - ဒီ HB German မှာနံပါတ်တစ်ခုရှိနေပြီ၊ ဒါပေမယ့်သူမနောက်ပိုင်းမှာလှဲချလိုက်တယ်၊
ဤသို့လုပ်ရန်ကောင်းမွန်သောအရာများ - ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ မြဲမြံလာသည်။ ငါထင်တာကတော့ဒါကကောင်းတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဟာအရင်ကဂရုမစိုက်ခဲ့တဲ့၊ - မိန်းမတွေကကျွန်မကိုလှောင်ပြောင်တာတွေအများကြီးပေးကြပေမဲ့ငါမြန်မြန်စုပ်ယူပြီးအချိန်ကိုဖြုန်းတီးသူတွေကိုပေါင်းပင်ပေးနိုင်သလိုခံစားရတယ် - ဒါကတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကပိုမြန်တဲ့လူတွေကိုရှာတာပါ။
- ဒါကကျွန်တော့်ကိုအဆိုးမြင်မှားယွင်းတဲ့မှားယွင်းတဲ့အတွေးအခေါ်ပညာရှင်တွေထဲကတစ်ယောက်အဖြစ်မဖြစ်လာအောင်တားဆီးပေးတယ်။ အင်တာနက်ကိုတစ်နေ့လုံးအမျိုးသမီးတွေနဲ့အခြားအရာအားလုံးကိုမုန်းတီးတဲ့သူတွေသိလား။
ဒီလိုလုပ်ဖို့အားနည်းချက်တွေက - မင်းကကောင်လိုလိုလိုဖြစ်လာတယ် - မိန်းမတွေကိုကြောက်တယ်။ သို့သော်၊ သင်သည်ဤအရာကိုကျော်လွှားပြီးသင်၏ဂိမ်းကိုယခင်ကထက်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ (မင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့မင်းလည်းပိုပြီးရိုးသားလာမယ်လို့ငါထင်တယ် - မင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအစကတည်းကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်သလိုသူလည်းအဲဒီလိုခံစားရတယ်) - မင်းဟာတစ်နေ့လုံးစိတ်ဓာတ်ကျတာကိုများများစားစား - ရက်တွေအများကြီး 'စွန့်ပစ်' ဖို့အသင့်ပြင်ထားပါ။ အလုပ်သို့မဟုတ်ကျောင်းတွင်ကြီးလေးသောစီမံကိန်းအလယ်တွင်ရှိနေသောမည်သူမဆိုအား NOFAP အားကျွန်ုပ်အကြံပြုလိုမည်မဟုတ်ပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ကောင်းအရမ်းရယ်ရတယ်သင်၏အဆင့်သို့မဟုတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မည်။ ဤအရာကိုရည်ညွှန်းရန်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးကိုဖြတ်သန်းရန်အတွက်သင်အချိန်များစွာလိုအပ်သည်။
ငါ့ရဲ့အချိန်ဇယားကိုရှင်းထုတ်ပြီးငါ့ဘဝမှာအရာသုံးခုကိုပဲအာရုံစိုက်နိုင်လို့ - ငါဒါအောင်မြင်ခဲ့တယ်။ ၁) အလွတ်တန်း ၂) အားကစားရုံ & ၃) အမျိုးသမီးများ။ အကယ်၍ သင်၌ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများထက်ပိုပါက၎င်းသည်ခက်ခဲနိုင်သည်။
TL: DR - NOFAP ကခက်တယ်။ သင်သည်များစွာသောငိုကြွေးမြည်တမ်းလျက်သင့်အသက်တာကိုမေးခွန်းထုတ်လိမ့်မည် ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့၊ မင်းဟာဘဝမှာအောင်မြင်ချင်သူတစ်ယောက်ဆိုရင်ရှင်သန်နိုင်ဖို့နဲ့ပိုမိုအားကောင်းလာဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုသင်ရှာလိမ့်မယ်။
stats: 24 yo, လူပျို, ဒါပေမယ့်စတင်ကတည်းကလိင်4ကြိမ်ရှိခဲ့ပါပြီ
42 ပြန်ဖွင့် / w 1 ရက်အကြာကစတင်ခဲ့သည်
10 yo, porn ~ 11 မှာရိုက်နှက်မှု Started, HBO သူကပြောတယ်
အတူ NoFap နားဆက်မှီရာတွင် / r / seductive/ r / Keto/ r / ကြံ့ခိုင်ရေး/ r / လှုံ့ဆျောမှု/ r / malefashionadvice/ r / ဘာဝနာ နှင့် / r / ယောဂ
ပန်းတိုင်: re-တည်ငြိမ်ငါ၏အလိင်စိတ်မှ NoFap ပွုလုပျခွငျးနှငျ့အမြိုးသမီးနဲ့ငါ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုမှနှစ်ခုအကြီးမားဆုံးပြဿနာများကိုပျောက်ကင်းစေ, PE နဲ့ ED
ငါလွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကငါ့ဘဝကိုပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့ကြပြီး No Fap သည် Seduction နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ငါ ED နှင့် PE နှင့်အတူရုန်းကန်ခဲ့ရသည်။ ကွန်ြတော်ဟာ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းခြင်းကိုခံစားနေခြင်းကြောင့်ကွန်ဒုံးကိုဘယ်တော့မှမသုံးခဲ့ပါဘူး။ ထိုအခါငါ flaccid လိင်တံထွက် dribble နှင့် bang, bang, ပေါ့ပ်, မိန်းကလေးကအရမ်းရှုပ်ထွေးသည်နှင့်ငါ demoralized ။
ကောင်းပြီ fapstronauts, ငါသွားပြီလွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်၏အဖြစ်ပြောနိုင်! လွန်ခဲ့သော ၂.၅ ပတ်အတွင်းကျွန်ုပ်သည်ကွဲပြားခြားနားသောမိန်းကလေး (၄) ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးပြီး၊ ငါဒီအသိုင်းအဝိုင်းကိုလုံလောက်စွာကျေးဇူးတင်လို့မရဘူး၊ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော့်ရဲ့အပြောင်းအလဲအချိန်ကသိသိသာသာတိုးတက်လာတယ်။ မနေ့က ၂ နာရီ၊ ငါပြန်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ ငါ၏အ libido များသောအားဖြင့်ယခင်ကတစ်ရက်သို့မဟုတ်တစ်ရက်နှင့်တစ်နှစ်ခွဲကြာအောင်များသောအားဖြင့်ဒါဟာမယုံနိုင်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်မှု (pe) သည်သိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ခြားနားချက်ကိုကျွန်ုပ်ကောင်းစွာရှင်းပြ။ မရပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံသောအခါ၎င်းသည်အလွန်ပျော် ၀ င်နိုင်ပြီး၎င်းသည်ကြာရှည်စွာတည်ရှိပါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးနေရန်၊
“ စူပါပါဝါ” တွေအကြောင်းကျွန်တော်အခုပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့ငါသိတယ်၊ ငါကအရက်ဆိုင်တွေမှာတုတ်ကြီးတစ်ချောင်းကိုင်ပြီး PUA နည်းစနစ်ကိုမဆုတ်မနစ်သုံးတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါနေချင်တဲ့နေရာမရှိဘူး။ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အသိုင်းအဝိုင်းထပ်ပြောပါရစေ၊ ကျွန်ုပ်သည်အကျိုးအမြတ်များစာရင်းကိုရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်းရေးသားရန်စီစဉ်နေပါသည်။ ဆက်လုပ်ပါ ဦး ။
Oh နှင့်စိတ်ဝင်စားသူတို့အဘို့, ဒီမှာကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုမမေးလျှင်တစ်ဦးကမျှမျှတတသိသိသာသာပြောင်းလဲမှု!
pmo သို့မဟုတ်မီတာအဘယ်သူမျှမအသုံးပြုမှုကိုနောက်မှငါကတရွေ့ရွေ့အပြုသဘောသက်ရောက်မှုကြည့်ဖို့စတင်နေပါတယ်။ ငါ၏အလိင်တံလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ဦးကတစ်လလျှင်ငါမိန်းကလေးငယ်များအားဖြင့်ထိမိခဲ့သည်ပင်အခါ, လုံးဝသေပြီပါလိမ့်မယ်။ ငါ့ကိုယ်ခဲ့သောဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမြင်ပြီးနောက်, ငါသည်အရာတစ်ခုခုကိုငါ့အ ed မှားခဲ့သဘောပေါက်လာတယ်။ ငါအွန်လိုင်း သွား. ဤ website အဖြစ် ybop တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါနောက်ဆုံးတော့ငါ့အပြဿနာ foud ။ တစ်ခုလုံးကိုတစ်နှစ် pmo ၏လေးလံသောအသုံးမပြုမီ, ငါငါ pmo ဘယ်တော့မှအရာ gf သို့မဟုတ်မီတာခဲ့ရပြီးအရာအားလုံးသည်ငါနှင့်အတူဿုံအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ အခုတော့ pmo သို့မဟုတ်မီတာမျှ၏တစ်လထိုနောက်ငါအများကြီးပိုကောင်းခံစားရနှင့်ငါ့လိင်တံအမှန်တကယ်ရိုးရိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံစဉ်းစားငါ့အားဖြင့်တုံ့ပြန်ထားသည်။ ဒါဟာအကြီးခံစားရပါတယ်။ နောက်ဆုံးညဥ့်ရုပ်ရှင်မှာနေစဉ်ရိုးရှင်းစွာငါ့မိတ်ဆွေထိအသုံးပြုပုံငါစိုက်ထူတယ်ဒါပေမယ့်% 100 မဟုတ်ပါဘူး။
အဆိုပါကိစ္စတွင်ငါသူတို့ကိုယ်သူတို့ဖို့ခိုင်မာတဲ့ကတိကဝတ်များနှင့်၎င်းတို့၏ reboot ရှိနေစဉ် pmo သို့မဟုတ်မီတာမ ed ခံစားနေရပြီးမည်သူမဆိုအကြံပြုသည်။ ဒါဟာရေရှည်မှာထဲမှာ 100% ကျိုးနပ်သည်။ ယခုတွင်ငါသည်ရှိသည်ခံစားချက်ကသင့်သကဲ့သို့ငါ၏လိင်တံယခုအလုပ်လုပ်တယ် သိ. အလုနီးပါးဘဝပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်။
အားကြီးသောယောက်ျားများနေပါနှင့်အရှုံးမပေးပါနဲ့။ လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအခြားအရာများကိုစဉ်းစားပါ။ အလုပ်များနေပြီးကွန်ပျူတာမှဝေးဝေးနေပါ။ အရေးကြီးပြီးလိုအပ်သောအရာအတွက်သာအသုံးပြုပါ။ အင်တာနက်ပေါ်မတင်ခင်မှာပစ္စည်းတွေအွန်လိုင်းမှာလုပ်နေတုန်းကျွန်မကိုယ်တိုင်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်နေတယ်။ ဒါကြောင့်အလွန်သတိထားပါ
90 နေ့ရက်များ Completed ။
ငါနောက်ဆုံးတော့လုပ်ပြီးပြီ! fapping သို့မဟုတ် porn မပါဘဲရက်ပေါင်း 90, နှင့် အပြင်းစား Mode ကိုအပေါ်။
ငါပထမ ဦး ဆုံးအဓိကအကြောင်းပြချက်များအတွက်စတင်ခဲ့သည်: ED ။ ထိုအခါငါယခုပျော်ရွှင်စွာပြောနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ပျောက်ကင်းအောင်ကုသခဲ့ကြပုံရသည်။ ငါစတင်ကတည်းကငယ်ရွယ်မိန်းကလေးနှင့်အတူအိပ်ပျော်ကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်ယခုငါစိုက်ထူအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်အများကြီးပိုမိုအားကောင်းလာပြီငါ! ငါနောက်ဆုံးတော့ကံကောင်းပါစေတစ်ချိန်ကဒါမျှော်လင့်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်ဖတ်ခဲ့သောအခြားအစီရင်ခံစာများကဲ့သို့သောမှော်အတတ်ပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းကိုယုံကြည်မှုရှိရန်လွယ်ကူသော၊ သက်သောင့်သက်သာရှိခြင်း၊ အပြုသဘောဆောင်သောအာရုံစူးစိုက်မှုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အဖြစ်သတင်းပို့နိုင်ပါစေ။
ED (ဒါမှမဟုတ်အဲဒါမရှိခြင်း) မှလွဲ၍ လွန်ခဲ့သောရက် ၉၀ ကမရှိတော့သောအရာများကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ နှိုးဆော်ခြင်းခံရသည်။ ငါဟာအမြဲတမ်းအသစ်အဆန်းတွေနဲ့အမြဲတမ်းတိုးပွားလာတဲ့အစွန်းရောက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေနဲ့ငါ့ ဦး နှောက်ကိုအာရုံလွဲသွားအောင်လုပ်လိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါနင့်ကိုနို့သီးခေါင်းတစ်လုံးကနေ ၁၅ စက္ကန့်လိုခံစားရတယ်လို့ပြောရမယ်။
ယခုတွင်ငါသည်ငါ၏နောက်ပစ်မှတ်အဖြစ်ရက်ပေါင်း 100 အဘို့အသွားမယ်!
တခြားလူတိုင်းကံကောင်းပါစေ။ Nike ကအဖြစ်နာမည်ကြီးဆိုရမည်မှာ, လုပ်သာလုပ်ပါ။
ရက်ပေါင်း ၉၀ အကြာတွင်
ကျွန်ုပ်အသက် ၂၈ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တွင် ED ရောဂါရှိခဲ့သည့် ၃-၄ နှစ်ခန့်တွင် ငါ 28 နှစ်ခန့် ED ဆေးများ (Viagra ကဲ့သို့) ယူနေပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေပိုကောင်းတယ်၊ တစ်ခါတစ်လေပိုဆိုးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါစိုက်ထူဖို့ဒီဆေးတွေလိုတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ငါ့ရည်းစားလည်းမကောင်းဘူး။ သူမကသူမရဲ့အမှားပဲလို့ထင်ပြီးကျွန်မအတွက်လုံလောက်တဲ့အပူမရှိဘူး။
ရက် ၉၀ အကြာ“ Brain On Porn” TEDx ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော့်ဘဝပြောင်းလဲသွားသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းမှုများသည်ကျွန်ုပ်အပေါ်မကောင်းသောသြဇာသက်ရောက်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသော်လည်း၎င်းကိုပြောင်းလဲရန်လှုံ့ဆော်မှုလုံးဝမရှိပါ။ ဗီဒီယိုကလုပ်ခဲ့တယ်။ ကိုယ့် gf နဲ့ပြtoနာမရှိဘဲလိင်ဆက်ဆံချင်တယ်။
ပထမ ၂ ပတ်ကတကယ်ခက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာငါခေတ္တရပ်နားလိုက်တယ် (ဘယ်လောက်ကြာကြာငါမမှတ်မိဘူး) ။ အကြောင်းပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ် ၃ ပတ်ခန့်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ကောင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုမကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိပြီးအချိန်တိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်သည်အဆင်ပြေစွာခံစားရသည် (လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူခြင်းကိုမစဉ်းစားတော့ပါ) ။
အခုငါ porn, fapping ချင်တော့ဘူးဆိုတာသိပြီ ငါမရှိရင်ပျော်တယ်
ဒီသုံးလမှာငါပုံမှန်ပြေးလာတယ်။ ငါနှောင့်နှေးရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ယခုငါ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့သည်။ ငါ NoFap မှော်ကဒီအရာတွေကိုလုပ်ဖို့ကူညီပေးတယ်လို့မထင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့ဘဝကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ noFap ဟာအစပြုခဲ့တယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်
ယနေ့ငါ PMOd ရှိသည်မဟုတ်ကြောင်း2လပတ်ပတ်လည်တစ်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ငါဟာနေ့တွေကိုမမှတ်မိတော့ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Ive ဟာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့တုန်းကနည်းနည်းလေးလေးနက်နက်“ ထိုက်တန်ပါတယ်” ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တစ်နည်းနည်းနဲ့ပြန်သွားမိလို့ပါ။ ဦး နှောက်ကလှည့်စားတာပဲ။ ယခုငါ၎င်းကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပြုလုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အဖြစ်ရှုမြင်ရန်ကြိုးစားသည်။ အဘယ်သူမျှမ ifs, ands, ဒါမှမဟုတ် buts ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကြောင့်ယခု၎င်း၏နှစ်လပတ်ပတ်လည်နှင့်ငါမနက်တိုင်းအလွန်ကောင်းသောစိုက်ထူရတဲ့။ တစ်နှစ်ရှိပါပြီ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယခု6လအတွင်းအဘို့ဤအရပ်၌လှည့်ပတ်ပို့စ်တင်ခဲ့တာ။ ငါကသက်သေပြငါ့ဂျာနယ်ထဲမှာပစ္စည်းပစ္စယများ 10 စာမျက်နှာများတယ်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကငါကြက်နှင့်အတူလှည့်ဖြားခြင်းနှင့်နှစ်များတွင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့အ BJ ကနေရောက်လာတယ်။ တကယ်တော့, နှစ်များတွင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အတူဖြစ်ခြင်းကနေလာတယ်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံစဉ်သို့မဟုတ်ဘီဂျီတစ်မျိုးရရှိခဲ့စဉ်ကဘယ်သောအခါမျှမတက်နိုင်ခဲ့ပါ။ ငရဲ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်ကကျွန်တော်မှာပြင်းထန်တဲ့ ED တစ်ခုဖြစ်ပြီးသေသွားပြီ။ Shit ကပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့ ငါဖြစ်ချင်တာအတိုင်းပဲခက်တယ်လို့မထင်ပါဘူး။
ငါဘယ်နေရာမှာငါဖြစ်ချင်တယ်ရှိရာအနီးဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ပါတယ်။ ငါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိသမျှတို့ကိုငါပြီးနောက် 36 ဖြစ်ကြောင်းကိုအလွန်အကျွံမျှော်လင့်ထား။ ငါကြက်နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံတစ်ချိန်ကသို့သော်ဤတစ်ခုသာပြည့်စုံအောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုမျှမကပဲတခါ။ ဒီခေါင်းနှစ်လုံးသည်အဘယ်မှာရှိသျောလညျးငါကြိုက်တယ်။ ငါပြောင်းလဲမှုများကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်, တိုးတက်မှုမြင်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာ (အဘယ်သူမျှမ Pun ရည်ရွယ်ပါသည်) တက်ဆင်းဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အမှုအရာတိုးတက်အောင်နေကြသည်။
ကျွန်တော်အဲဒီကိုရောက်ဖို့ ၉ လ ၁၂ လလောက်ကြာလိမ့်မယ်။ အတိအကျမဟုတ် ၃-၅ လသင်ဒီမှာဖတ်ရန်။ သို့သော်လည်းငါသည် shit မပေးပါဘူး ကျွန်တော်အဲဒီကိုသွားချင်တယ် ငါရောက်လိမ့်မည် ကာလ
အခြားသူမည်သူမဆိုညစ်ညမ်းသွေးဆောင် ED ထံမှခံရ?
ငါ porn-induced ED ခံစားခဲ့ရပြီးစုံတွဲတစ်တွဲလွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်အလားတူအခြေအနေမျိုး၌ရှိ၏။ ငါကပထမ ဦး ဆုံးမှာအချိန်တစ်ဝက်အကြောင်းကိုလုပ်ကိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ထနိုင်ဘူး။ ထိုအခါငါဆောင်းရာသီအားလပ်ရက်ကျော် NoFap ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း, အကြောင်းကို2ပတ်ခန့်ငါ့ရည်းစားကိုမမွငျခဲ့သညျ ကျနော်တို့ကောလိပ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့ (၁၀) ရက်မှာ ED မပါဘဲလိင်ဆက်ဆံမှုပြုခဲ့ပါတယ် (အရက်ကပြaနာတစ်ခုဖြစ်နေဆဲ) ။ ငါကွာခြားချက်အားဖြင့်ကွယ်ပျောက်ခဲ့သည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့လူတိုင်းနှင့်တိုင်းခွအေနကေိုကွဲပြားခြားနားသည်။ သငျသညျအကွောငျးကိုသတိထားပြီးအကောင်းမြင်ဖြစ်သင့်တူသောသို့သော်လည်းငါသည်ခံစားရတယ်။ IMO, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားကဒီရန်နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ငါ ED ထံမှအချို့သောစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြောင်းကိုငါသိ၏။ သို့သော်ရှိသမျှသောအချိန်, ငါကလတ်ဆတ်တဲ့က start ခဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောပြခြင်းနှင့်အာရုံအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်အတိတ် ED မဆိုအတှေးအထွက်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ထိုအဖြေလျော့။ တစ်အိပ်ချင်-ဖြေလျော့ပေးခြင်းကိုကြိုက်ပေမယ့်တစ်ဦးယုံကြည်မှု-I-Know-သောအရာတို့ကို-များမှာ-ဂုဏ်န-အလုပ်-ဖြေလျော့ပေးခြင်းမဟုတ်ပါ။
ဒါ့အပြင်ညမအိပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ညမအိပ်နိုင်ဘူးဆိုတာမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။ သင် PIV မကြိုးစားမီသူမ၏လက်ချောင်းများသို့မဟုတ်ပါးစပ်ဖြင့်သူမ၏ချွတ်။ ပြီးတော့သင်ထလိုက်သည်ဖြစ်စေမလုပ်သည်ဖြစ်စေသူမပျော်စရာကောင်းသည်ကိုသင်သိသည်။ နောက်တစ်ခုကသင်ထသည်ဖြစ်စေမနောက်တစ်ခုက NoFap အကြောင်းပြောဆိုပြီးသူမကိုပြောပါ။ သူမသည်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုမလိုချင်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်အနည်းဆုံးတော့သင်အောင်မြင်စွာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၌ရှိနေသည်ဟုရှင်းပြသည် ရလဒ်များကိုတစ်ပတ်အတွင်းတွင်မတွေ့ရလျှင်ပင်သင်ကုစားနေပါသည်။
ED ယခုပြဿနာ Gone ပေမယ့်အချိန်မတန်မီသုက်။ ကူညီပါ?
ယခုအတော်လေးခဏ nofap လုပ်နေတာနဲ့ကျွန်မ ED နဲ့ငါ့ကိစ္စများငါ (သင်တန်း porn မပါဘဲ) masturbate ရန်ကြိုးစားသောအခါထိုပြဿနာဖြစ်ပါသည်, 99% သွားကြောင်းဖြစ်ကြောင်းခံစားမိခဲ့တာငါအော်ဂဇင်ဟာပေါ့ပါးဆုံးချုပ်ကိုင်သုံးပြီးမိနစ်နှင့် im အတွင်းပေါ်လာမယ့်ခံစားရနိုင်ပါတယ် ဖြစ်နိုင်ပါ။ မည်သူမဆိုဤအဖြေတစ်ခုရှာတွေ့ခဲ့ဖူးပါသလား အခြားသူများထက် KEGELS ။ ငါနီးပါးငါကဒီအချက်မှာ DE ခဲ့သည်၎င်း၏ဝေးလျော့နည်းရှက်စရာအလိုရှိ၏။ ကြေးဇူးတငျစကား
ငါသည်ဤတိုတောင်းခြင်းနှင့်အချက်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ (link ကို)
ပြန်ဖွင့်အတွေ့အကြုံ: ဒါဟာကျွန်တော့်ဘဝမှာအခက်ခဲဆုံးအရာတစ်ခုထဲကတစ်ခုပါ။ ကျွန်ုပ်၏စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်၌ကျွန်ုပ်ရွံရှာခြင်းကိုလှုံ့ဆော်မှုအတွက်အသုံးပြုသည်။ ငါစိုက်ထူခြင်းပြproblemsနာများနှင့်အတူရုန်းကန်ငါ့အသက်တာ၏ဤမျှလောက်များစွာသောဖြုန်းတီး။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပူနွေးစေတဲ့ရင်ခွင်ကငါ့စိတ်ကိုနင့်ကခုန်ခဲ့ပေမယ့်ငါ့ဘောင်းဘီမှာအရေးယူမှုမရှိဘူး။ လိင်ကိုစိုက်ထူရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန် ED ဆေးအမျိုးအစားတစ်မျိုးမပါဘဲလောင်းကစားခြင်းဖြစ်သည်။
အဘယ်သို့ငါအခုတော့ခံစားရ: GREAT !!!! ငါစိုက်ထူတယ်ဖုန်းပေါ်မှာအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်စကားပြောသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အကြောင်းကိုစဉ်းစားရနိုင်။ ငါ့စိတ်ထဲမှာတစ်ခါတလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုသံသယဝင်ရင်တောင်အခုငါစိုက်ထူတာကိုပြproblemsနာမရှိဘူး။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ယခင် ED ကိစ္စများမှဖြစ်ပြီးအချိန်ကုန်လွန်သွားသည်။ ယခုငါလိင်ဆက်ဆံဖို့အချိန်လာသောအခါငါမကြိုးစားအားထုတ်မှုမရှိဘဲငါစိုက်ထူသောအချိန် 98% ။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုငါလုံးဝဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ဒီတော့ငါကအော်ဂဇင်ကိုသွားရင်မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဖို့ပိုကောင်းတယ်။ ငါ့ကိုယ်ခန်ဓာကိုယ်ကိုအသုံးမပြုလိုတာဒါမှမဟုတ် PMO ထဲကိုပြန်ကျသွားတာကိုမလိုချင်ဘူးလို့ငါမရွေးချယ်ခဲ့ပါ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရံဖန်ရံခါပေးပို့နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဓာတ်ပုံအချို့ကိုငါကြည့်ကောင်းရှုမည်။ ဒါပေမယ့်သင့်ရုပ်ပုံများသည်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုဟန်ချက်ညီအောင်ပျက်စေသောကြောင့်ရုပ်ရှင်များကိုကြည့်ရှုခြင်းတွင်မပါဝင်ပါ။
ကျွန်ုပ်သည် ၄၆ နှစ်အရွယ်လူငယ်တစ်ယောက်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၀ ကျော်တွင်ခံစားခဲ့ရသည်။
90-တစ်ခုခုရက်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ FAP အခမဲ့:
porn / FAP-သွေးဆောင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ED သွားကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်လွယ်ကူစွာအလွန်ခက်ခဲရယူပါ။ , G / F ကို PIV အော်ဂဇင်မှယူဆောင်ထားပြီး အလွန် ပိုပြီးမကြာခဏဒီရက်။
အဆက်မပြတ် (ဖြစ်ကောင်းထွက်အလုပ်လုပ်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုကနေလာမယ့်) လိင်ကစိတ်ပျက်, အဆက်မပြတ် horny မြင့်မားစံချိန်စံညွှန်းများမလုံလောက်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြိမ်ရေအဘို့, G / F ကိုအတူမကြာခဏစိတ်ပျက်။ အချိန်အများကြီး (ဘယ်သူမျှမဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြသော်လည်း) အခြားမိန်းမနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံများ၏ / စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းကူးယဉျဖြုန်းနေကြတယ်။
အထဲကအလုပ်မလုပ် (ဓာတ်လှေကား, ပြေး, ဆိုင်ကယ်) တစ်ပတ်ကို5ကာလ၏7(ဒီသော်လည်းနှစ်ပေါင်းသွားလျက်ရှိသည်) ။
အချို့သောအတိုင်းအတာအထိ - ၎င်းသည်စိတ်ပျက်စရာအချို့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း အလွန်နာကျင်စေငါနောက်ကျော fapping / PMO သွားမရှိရည်ရွယ်ချက်ကိုရှိသည်။ အခြားသူအပေါငျးတို့သညျငါ၏ Pseudo-ED သောယုံကြည်မှုအထက် မရှိတော့ပါ ပြဿနာတစ်ခုသမျှအကျိုးခံစားခွင့်၏အကြီးမြတ်ဆုံးပါပဲ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏ကြိမ်နှုန်းမရှိခြင်းအကြောင်းကိုအတွင်းမငြိမ်မသက်သည်အခြားရေးရာမှသည့်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်တချိန်က ဘဲ PMO / MO ကနေအကျင့်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်၊ အားကစားခန်းမသို့သွားခြင်းနှင့်အတူတူပင် - သင်ကနေ့စဉ်အလေ့အထကိုလုပ်မိလျှင်၊ ၎င်းကိုဆက်ထိန်းထားရန်မှာမလွယ်ကူပါ။
Misc မှတ်စု: ငါဖြစ်၏ မယုံနိုင်လောက်အောင် NoFap ကသူတို့ကို“ စူပါပါဝါ” တွေပေးတယ်လို့စာရေးတဲ့သူတွေကိုသံသယဖြစ်မိတယ် - ငါဟာသူတို့ကိုအသိဉာဏ်မရှိသူ (ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ရလဒ်များအရရလဒ်ရလဒ်မရနိုင်) ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေဟာလက်တွေ့မကိုက်ညီတဲ့ lala-land မှာနေတယ် NoFap ကအရမ်းဖြေရှင်းဖို့ကူညီခဲ့တယ် တိကျတဲ့ porn / fap-induced ED၊ ပြexperienceနာက“ အိပ်ခန်းထဲမှာ” ငါ့ရဲ့အတွေ့အကြုံ၊ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ယုံကြည်မှုတိုးမြှင့်လာတယ်။
ကိုယ့်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ငါ့အိပ်ရာထိုင်နှင့်ငါ့ရည်းစားစာပို့နှင့်ရုတ်တရက်အပေါငျးတို့သငါခက်ကျောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ မရငါ porn အဘို့, ဒါပေမယ့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့အကွောငျးထိုနညျးတူခံစားရသူတစ်ဦးကိုမှန်ကန်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ horny ခဲ့လို့ပဲ။
ကျနော်တို့လုပ်အဘယ်ကြောင့်ညီအစ်ကိုများ (နှင့်ညီအစ်မများ), ဒီနည်းကိုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကကိုယျ့ကိုယျကိုထိန်းချုပ်ပြန်ယူရန်, အမှန်တကယ်လူများအတွက်ပုံမှန်စိတ်ခံစားမှုနှင့်အတူဘဝအသက်ရှင်ဖို့လုပ်ပါ။ ဒါဟာလိင်ခံစားရပုံကိုပုံမှန်ဖြစ်ပြီး, ငါတယောက်တည်းဒီအမှတ်ဆည်းပူးနိုင်ပေ။ သငျသညျ NoFap ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Kegel + Nofap အဘယ်သူမျှမ ED =?
ငါ kegals အကြောင်းသိပ်မသိပေမယ့်သူတို့ဒေသကိုအားကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာငါကြားခဲ့ပြီ။ PIED ကိုကုသရန် nofap နှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းကြောင့်ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်တော်သိသည်မှာငါသည်နှစ်ပေါင်းများစွာ PIED နှင့်အကြိမ်ကြိမ်အကြိမ်ကြိမ်အကြိမ်ကြိမ်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ၎င်း၏ porn brotha ... အမြဲဖြစ်ခဲ့သည်အမြဲတမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့ PIED ကိုကုသချင်ပါသလား ၎င်းသည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုကောင်းကောင်းဖုံးကွယ်နိုင်သည်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဒစ်ခ်ျသည်အမှန်တကယ်ကလေးငယ်များနှင့်မတူပါကသင် porn မှထွက်ခွာသွားရန်သင့်အတွက်လှုံ့ဆော်မှုမလုံလောက်ပါကကျွန်ုပ်သည်ဘာလဲဆိုတာကျွန်ုပ်မသိပါ။ ၎င်းသည် PIED ရှိသူအားကျွန်ုပ်စဉ်းစားနိုင်သည့်အစွမ်းထက်သောစေ့ဆော်ချက်ဖြစ်သည်။ ငါက brotha ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါမရှိတော့ဘူး
ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီး ၂၅ နှစ်ကျော်ကြည့်ပြီးစားသုံးမှုပမာဏသည်အိပ်ခန်းတွင်အောင်မြင်မှုရရှိခြင်း (သို့) လုံးဝပျက်ကွက်ခြင်းဖြစ်စေသည်။ မင်းအိပ်မက်မက်နေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့သူမခုန်ပေါက်နိုင်မယ့်အလားအလာကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ သူမမှာအဝတ်အချည်းစည်းမရှိဘူး၊ သင် porn မှာကြည့်ဖို့ urgw မှာပြောတဲ့အခါသူမသူမကို fuck ဆိုတဲ့တောင်းပန်ပါတယ်။ porn ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအောင်နိုင်ရန်ထိုလှုံ့ဆော်မှု / ကြောက်ရွံ့မှုကိုအသုံးပြုပါ။ အချိန်တန်တဲ့အခါမင်းကိုချစ်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်။ သင်၏စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီမခန့်မှန်းလိုပါ။ ကံကောင်းပါစေ၊ မင်းရဲ့ PIED ကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသချင်ရင်…။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်တော့ဘဲအချစ်တိုင်းလိုလိုမှာစစ်မှန်တဲ့မိန်းမနဲ့မဆက်ပါနဲ့။ ကြမ်းတမ်းသောအသံများဖြစ်သော်လည်းအမှန်တရားဖြစ်သည်။
အသက်အရွယ် 25, ဆယ်ကျော်သက်များတွင်မိုးသည်းထန်စွာ pmo, ကတည်းကကြိုကြားကြိုကြား။ ထိခိုက်လိင်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံ
ဘယ်ကစရမလဲ။ ကျွန်မတို့မိသားစုကအင်တာနက်ကို ၁၉၉၈၊ ၁၉၉၉ လောက်မှာဆက်သွယ်တယ်။ ကျောင်းကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုငါကြားဖူးတယ်၊ ဖေဖေတောင်မှအဲ့ဒီအကြောင်းပြောပြတယ် (သူဟာမကောင်းတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုတစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ဘူး) ။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်လောက်မှာငါဟာတစ်ခြားမိနစ်တိုင်းမှာပုံမှန်ကျန်းမာတဲ့ဆယ်ကျော်သက် hornball ပါ။ “ The Sun” သတင်းစာ (topless pose) ၏စာမျက်နှာ ၃ အတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ mastubation ခရီးသည် ၁၂ နှစ်အရွယ်သာရှိသေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပိုက်ကွန်အကြောင်းကျွန်ုပ် ပို၍ သိသောအခါမိဘရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကိုရှောင်ရန်အတော်လေးလွယ်ကူသည်။
အသက်အရွယ် 14-17 နှင့်ငါ့ porn အလေ့အထမှအစာရှောင်ခြင်း foward သိသိသာသာဆိုးရွားလာခဲ့သည်ခဲ့သည်။ ကျောင်းမှာကနေအိမ်ပြန်လာမယ့်အခါငါနီးပါးနေ့တိုင်းလှိုင်း porn ရန်ကြိုးစားခဲ့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်း (တက် dial ၏လက်ထက်ကာလ၌) ဒါကြောင့်မြင့်မားတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်ငါ့အဖေအံ့ဩကြ၏။ နွေရာသီအားလပ်ရက်၌ငါ porn အပေါ်တစ်နေ့လျှင် 2-3 နာရီပေါင်းပျမ်းမျှဖြုန်းကြရသည်။ ဒါဟာငါမျှဝေဖို့လည်းရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဖြစ်ကြောင်းကိုအမျိုးအစားများသို့လွန်းအကြောင်းအရာတိုက်ပွဲတွေအရှိန်မြင့်လာခဲ့သည်။ အသက်အရွယ် 16 / 17 အားဖြင့်ငါမဆိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လက်ခံရရှိရန်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မယ်လို့တူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုရတဲ့မခံ, အတန်ငယ်ငြင်းပယ်အတွက်ငါက porn ခဲ့သံသယခဲ့ဘူးပေမယ့်။
အသက် ၁၇/၁၈ အထိရှေ့သို့ပြေး; ကျွန်ုပ်၏မိခင်သည်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်၏ဒေသခံဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင်အတည်ပြုစာသင်တန်းတက်ခြင်းသည်ကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာခရစ်ယာန်ဘာသာကိုစိတ် ၀ င်စားဖို့နဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုကိုဖယ်ရှားဖို့ရံဖန်ရံခါဆုတောင်းခဲ့တယ်။ ငါဖြစ်လာသူကိုမုန်း၏, ငါကျောင်းမှာအကူးအပြောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်, ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့မခံမရပ်နှင့်တစ် ဦး တံခါးပေါက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၇ နှစ်ခွဲလောက်၊ နူးညံ့သော“ vanilla” အပြာများကိုပြန်ကြည့်မိလျှင်၊ ကြက်ဆင်သည်ကောင်းသော၊ တော်တော်အေးသောအပင်ကိုစွန့်လွှတ်လိုက်သည်။ (porn masturbation မဟုတ်) ။ လူသိရှင်ကြားကတိပြုခြင်းမပြုမီအများပြည်သူသိသင့်သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်ဘ ၀ ကိုသီးသန့်နေထိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အရမ်းအနည်းငယ် relapses နှင့်အတူ 21 / 22 ၏အသက်အရွယ်သည်အထိ uni ၏အစောပိုင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှတဆင့်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအဖြစ်ဆက်လက်။ တဦးတည်းအဆင့်မှာငါပင်လပေါင်းများစွာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့သည်။ သို့သော်အသက်အရွယ် 22 န်းကျင်ငါသည်ငါ၏ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. အခြေခံဥယျာဉ်စောင့် / တရားဝင်မှုမေးခွန်းထုတ်လာတယ်။ ဖြည်းဖြည်းချင်းပေမယ့်ဧကန်အမှန်, ငါ၏ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုပျက်ပြယ်စပြုလာသည်။ ငါခရစ်ယာန်ဘာသာ၏လိင်အနုတ်လက္ခဏာယဉ်ကျေးမှုကူညီပေးခဲ့သည်များနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းဆန့်ကျင်နေတဲ့တိုကျပှဲထောက်ခံထင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်မဟုတ်တဲ့ခရစ်ယာန်တွေကိုပိုမိုသွားလာခြင်းမှစတင်ခဲ့ပြီးဘားစသည်တို့မှထွက်ခံစားခဲ့ရ
ယနေ့မှယနေ့အသက် 23 မှအစာရှောင်ခြင်းရှေ့ဆက်။ ငါ Uni အသက် ၂၃ နှစ်မှာဘွဲ့ရပြီးမြို့ကြီးတစ်မြို့မှာအလုပ်ကောင်းကောင်းရဖို့အရမ်းကိုကံကောင်းထောက်မစွာပဲ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအတွက်အဓိကအတားအဆီးတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ကအပျိုစင်ဘ ၀ ပဲ။ ပုဂ္ဂလိက၌, ငါ့ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုသည်နောက်တဖန်အရှိန်အဟုန်မြှင့်စတင်ခဲ့ပေမယ့်ဒါဟာဆယ်ကျော်သက်အဆင့်နီးပါးဘယ်နေရာမှာရှိ၏ ယင်းကိုမျှတရန်ကြိုးစားနေခြင်းမဟုတ်သော်လည်း fapping ဖြင့်တစ်ပတ်လျှင် ၂ နာရီသို့မဟုတ် ၃ နာရီခန့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏မြို့သစ်တွင်သူငယ်ချင်းများကိုအလျင်အမြန်အလျင်အမြန်မိတ်ဖွဲ့ခဲ့သည်။ သို့သော်တစ်ခုခုပျောက်နေသေးသည်။ အမျိုးသမီးများနှင့်ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှု။
ငါပထမ ဦး ဆုံးပြောင်းရွှေ့သောအခါငါမိန်းကလေးများနှင့်အတူအခွင့်အလမ်းစုံတွဲတစ်တွဲရှိခဲ့ပေမယ့်ငါသဘောတူညီချက်တံဆိပ်ခတ်ဘူး (ငါ porn ၏ရလဒ်အဖြစ်နီးပါးဆက်ဆက်, ငါ၏ ဦး ခေါင်း၌သူတို့၏ဆွဲဆောင်မှုမေးခွန်းထုတ်) ။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာအပျိုစင်ကောင်လေးတွေနဲ့အတူအေးအေးဆေးဆေးနေချင်ကြတာ။ ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသောအကျင့်သည်တစ်ပတ်လျှင် ၁-၂x နှုန်းဖြင့်တစ်ပတ်လျှင် ၁-၃ နာရီနှုန်းဖြင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
အသက် ၂၅ နှစ်မှာအနီးအနားကမြို့တစ်မြို့ကိုကျွန်တော်ပြောင်းခဲ့တယ်။ ငါ့ရဲ့လက်ရှိလူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းအတော်များများပြောင်းရွှေ့သွားကြတယ်။ ငါ ppl တွေ့ဆုံရန်အပူတပြင်းကြီးနှင့်အလုပ်မှာငါ့ဇာတိမြို့ကနေမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူစကားပြောစတင်ခဲ့သည်။ ငါသူမနှင့်ကွဲပြားသောဌာနတစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူမသည်မကြာမီလူမှုရေးရာများဖြစ်ပျက်နေကြောင်းသိလားဟုမေးခဲ့သည် သူမကသောကြာနေ့မှာသူငယ်ချင်းအနည်းငယ်နဲ့ကျွန်တော့်ကိုဖိတ်ခဲ့တယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်သွားကြသောအခါ, ထို့နောက်အတော်လေး flirty တယ်။ ငါကသိတယ်မတိုင်မီကျွန်တော်နောက်ကျောသူမ၏မှ ဦး တည်ကြသည်ဟူ။ ၎င်း, ရလဒ်!?
သို့သော်ဘောင်းဘီဌာန၌ဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါ သေပြီ ငါသည်ဤအာရုံကြောများနှင့်အရက်မှစွပ်စွဲ။ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာငါတို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးအပျိုစင်ဘဝကိုအောင်မြင်စွာဆုံးရှုံးနိုင်ခဲ့ပေမယ့်ငါဟာ ၇၀% ပဲခက်ပြီးငါ့စိုက်ထူမှု ၂ မိနစ်အတွင်းဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ပစ္စည်းကိရိယာပျက်ကွက်တယ်
ငါကျောက်ကဲ့သို့ခဲယဉ်းလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထား။ နောက်တဖန်ငါ porn သံသယနှင့်ဤ website ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ချက်ချင်းပဲ၊ ငါကနုတ်ထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ ငါတစ်လ porn အခမဲ့နေ၏; ဤအချိန်အတောအတွင်းကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် (ယခုအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသောမိတ်ဆွေများ) နှင့်ဆက်လက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဆက်လက်တွေ့မြင်ခဲ့သည်။ ကန ဦး ပျက်ကွက်မှုအပြီး ၁၀ ရက်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုနှစ်ကြိမ်အောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ အချိန်တိုင်း ၉၀% ဝန်းကျင်ခက်ခဲသည်။ ငါထောင့်လှည့်ခဲ့သည်တူသောငါခံစားရတယ်။ စက်တင်ဘာလအကုန်ပိုင်းမှာကျွန်မတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ခဲ့သည် (ငါမကြာချင်သော်လည်းကြာရှည်မည်မဟုတ်သော်လည်း) ။ အခြားဒေသများအပေါ်ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုသည်လည်းတိုးတက်လာခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်သည်အလုပ်နှင့်လူမှုရေးတွင်ပိုမိုပါဝင်မှုရှိသည်ဟုခံစားခဲ့ရပြီးကျွန်ုပ်၏အမှုကိုငြင်းခုံရန်မကြောက်ခဲ့ပါ။
အောက်တိုဘာလရဲ့ start မှအစာရှောင်ခြင်းရှေ့ဆက်; ငါခေတ္တမျှဆိုသော်ငြား5နေ့ရက်ကာလ၌ညစ်ညမ်း5ကြိမ်နှင့်အတူပြန်ရောက်သွားတယ်ပါပြီ။ သို့သျောလညျးအဘယ်သူမျှမ fapping ။ ဒါကြောင့်ငါဘာမှထက်ပိုမုန်းအဆိုပါ porn ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်ဒီယုံကြည်မှုဆက်ဆံရေးနှင့် virility အပေါ်တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်အရာဖြစ်တယ်။ ငါနောက်ဆုံးအဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းမှပြန်လည်စတင်နေ့အောက်တိုဘာ 9th အောင်ဖြေရှင်းနေပါတယ်။ ငါ Chronicle မှကျွန်မရဲ့ခံစားချက်တွေကိုတစ်ဂျာနယ်စတင်ခဲ့ကြနှင့်ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဤမျှလောက်ကူညီပေးသည်သောတလျှောက်လုံးထောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
fap အယူအဆနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်လုံးဝမယုံကြည်သေးပါ။ ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများကိုမှားယွင်းစွာပြောခြင်းသည်မလိုအပ်သောအပြစ်များစွာနှင့်မိမိကိုယ်ကိုမုန်းတီးခြင်းစသည်တို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ porn နှင့်အတူမရ။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်စဉ်းစားလျှင်သင်လွန်ခဲ့သောရက်များကကဲ့သို့သင်၏စိတ်ကူးကိုသာအသုံးပြုသင့်သည်။ ထို့အပြင် fapping သည်နေ့စဉ်ဖြစ်သင့်သည်မဟုတ်ပါ၊ သငျသညျမယုံနိုင်လောက်အောင် horny အခါသာဖြစ်သင့်သည်။
porn အခမဲ့ (32M) 179 ရက်ပေါင်း ED ကိုဖကျြဆီး !!! နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အစစ်အမှန်သဘောတူညီချက်များအတွက်အနည်းငယ်ပြန်လာ; )
ငါမိန်းကလေးများသည်ယနေ့, သူတို့နှစ်ဦးကိုတစ်နေ့များမှာနောက်ဆုံးသောကာလနဲ့မေတ္တာစေ; ) ကျွန်ုပ်၏စိတ်လှုပ်ရှားအနည်းငယ်သာခဲ့သော်လည်းငါ့ဒစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်ကိုယ့်ဒစ်အပေါ်အာရုံခံစားမှု cum.little ။ ငါ porn အခမဲ့ 179 ရက်ပေါင်း့ကြောင့်ကိုယ်ဒီလကောင်းသောလိင်ဆက်ဆံဆဌမအချိန်, ငါ၏အသက်တာ၏ဆဌမအချိန်ဈလိင်မှာအပျြောအပါးယူ s !!!! ငါသည်ငါ၏ပျော်မွေ့နိုင်အောင်ဝေးဈ porn နှင့်အတူရှိခဲ့သည့်အပျြောအပါးသောကြောင့်ထိုသို့အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောပျော်မွေ့ခြင်း Sa ရုံငါ၏အ reboot အလယ်၌ im ထင်, ကိုယ့်များစွာကိုအာရုံခံစားမှုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့်မိန်းကလေးများအတူခံစားရဖို့ရှိသည်။ ဒီတစ်ခါလည်းဈယခုအချိန်တွင်များအတွက်မိန်းကလေးများနှင့်အတူများပြားလွန်းအော်ဂဇင်ခဲ့? အကြှနျုပျ၏စိတျကိုမိန်းကလေးတွေမစိုးရိမ်စိတ်ကပိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အလွန်အေးမြသည်, ) အနာဂတျအတှကျငါယုံကြည်ပါတယ်!
ငါဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးသားခဲ့သည်, ငါ PMO မပါဘဲရက်ပေါင်း 30 သွားသောကြောင့်ငါဝမ်းနည်းဖွယ်။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အချက်က ၃၃-၃၄ ရက်အကြာမှာကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာတယ်။ (မမှတ်မိဘူး) အဲ့ဒီနေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်မရဲ့လက်ရှိရည်းစားနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးသောက်ကြပြီးပြီ။ ငါက ၁၀၀% ခက်တယ်မဟုတ်ပေမယ့်သူမ cum လုပ်ခဲ့တုန်းကဒါကငါ့အတွက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ ငါထင်တယ်၊ ငါမူးခဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ အဲ့လိုမျိုးအရာတွေဖြစ်ရင်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာပဲ။
အဲဒီနောက်မှာကျွန်မတို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာလိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ကျွန်မကိုတော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အလုပ်မလုပ်ဘူး ငါတကယ်အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတကယ်ကြောက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမရှင်းပြနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခုငါနှင့်အတူဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် ထိုအချိန်ကတည်းကအချိန်တိုင်းတွင်လိင်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၁၀၀% မဟုတ်သေးသော်လည်းတစ်ညတွင် 100-2 ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံနိုင်သည်။ အဲဒါဟာမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ မဝါးဝါးမဖြစ်ရင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ဒါကြောင့်မင်းတို့ယောက်ျားတွေကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှာရမယ်ထင်တယ်၊ မင်းတို့မင်းတို့ပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါကမင်းရဲ့ reboot ရဲ့သော့ချက်ပဲ။ ငါကနေ့တိုင်းနီးပါးလိင်ဆက်ဆံတာကြောင့်ညစ်ညမ်းမှုနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုမစဉ်းစားတော့ဘူး။ ၎င်း၏တော့ဘူးတစ်ခု option ကို။
၃၈ ရက်အကြာတွင် ED တိုးတက်မှု၊ DE သည်“ ပျောက်ကင်းသွားပြီ” နှင့်…ပြန်လည်အသက်ပြန်ရှင်လာသည်
ED နှင့် / သို့မဟုတ် DE နှင့်အတူရုန်းကန်နေကြသောသူတို့အဘို့ရုံအနည်းငယ်အစီရင်ခံစာ။
ဒါကြောင့်ငါကဒီမိန်းကလေးနဲ့အတူရှိတယ်၊ အကြိမ်ပေါင်းများစွာလိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ငါမထနိုင်ခဲ့ဘူး ငါဟာ NoFap“ flatline” လို့ပြောခဲ့တယ်။ ငါလိင်ဆက်ဆံတာကစပြီး ED (အောင်မြင်တဲ့လိင်ဆက်ဆံမှု ၃၀%) ရှိခဲ့တာကိုမပြောခဲ့ဘူး (လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်၊ ကျွန်ုပ် ၂၈ နှစ်) ။ ငါ DE ရှိတယ်လို့သူမကိုပြောခဲ့တယ်။ လိင် (သို့) ပါးစပ်နဲ့ဆက်ဆံစဉ်ရာပေါင်းများစွာထဲက ၃ ကြိမ်ပဲငါလာတယ်) ။
ဒါကြောင့်မနေ့ညကညဖြစ်တယ်၊ STD စစ်ဆေးမှုရလဒ်အနုတ်လက္ခဏာရတယ်။ ဒါကြောင့်ကွန်ဒုံးမသုံးစရာမလိုဘူး (အဲဒါပေါ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုကျဆင်းစေတယ်) ။ ငါအခွင့်အလမ်းပိုများချင်သောကြောင့်ငါ Viagra ၏ 50mg ကိုယူ။ Viagra ကကူညီသည်၊ သို့သော်မလုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအတွက်အထောက်အကူပြုသည်၊
ဒါကြောင့်ကျွန်မဘက်မှာအဆင်မပြေခဲ့ပေမဲ့သူမအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားသွားပြီးလိင်ဆက်ဆံဖို့အရမ်းခက်ခဲ့တယ်။ ငါအတော်လေးပျော်ခဲ့တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ချိန်က“ ငါ့အမှား” မဟုတ်ဘူး🙂
ထို့နောက်သူမ blowjob စတင်ခဲ့သည်။ ခဏကြာသည်။ ငါအပြီးသတ်ချင်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါ porn porn တွေကိုစပြီးစဉ်းစားခဲ့တယ်။ BAD IDEA ပြီးတော့မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာငါရောက်လာတယ်။
ဒါကြောင့်ဟုတ်တယ်၊ ငါ porn အကြောင်းစဉ်းစားတာမကောင်းဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါ NoFap မတိုင်မီကလုပ်ခဲ့ရင်တောင်အဲဒါကအလုပ်မလုပ်ဘူး။ ဒါကြောင့်တိုးတက်မှုတစ်ခုရှိတယ်။ Viagra နှင့်အတူအလုပ်မလုပ်သောကြောင့် ED သည်ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။
နံနက်ယံ၌ငါ "chaser အကျိုးသက်ရောက်မှု" ခံစားခဲ့ရစတင်ခဲ့ ... ငါပြန်လာသော။ ငါသည်လည်း BJ ကိုယူစဉ် porn ကိုစဉ်းစားသောကြောင့်လည်းထင်ပါတယ် ငါ 100% ကုသခံသည်အထိမလာရန်နှင့်ပိုကောင်းသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအလွန်ဆိုးရွားစေလိုသည်။ 🙂ဒီတော့ဟုတ်တယ်၊ နို့စို့ပေမယ့်တိုးတက်မှုကိုငါဝမ်းသာတယ်၊ နောက်ထပ်သွားဖို့အဆင်သင့်ပဲ။
ငါလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုပြန်သွားတော့မယ်, ဒီ Streak ကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေမျှော်လင့်ပါတယ်, ဒီကအံ့သြစရာပဲ!
လပေါင်းများစွာလမ်းလျှောက်ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော့်ရဲ့ပထမဆုံးကြယ်ပွင့်ဖြစ်လို့မျှော်လင့်ချက်ကိုလည်းမပျောက်စေပါနဲ့။ သင်လုပ်နိုင်သည်ကိုယုံသည်မှာကျွန်ုပ်အားအကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်ဖြစ်သည်။ ဒီအတွေးအခေါ်ကငါဒီ Streak လုပ်ပုံကိုတကယ်ပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့်အချိန်ကြာနိုင်, ခိုင်မာတဲ့သူငယ်ချင်းတွေနေဖို့, ဒါပေမယ့်ဒါဟာအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ပုံရသည်။
ဒီချည်မှ လိင်ပူပန်သို့မဟုတ် Erectile အလုပ်မဖြစ် Related Porn?
ငါကိုယ်တိုင်ဒီပြproblemနာကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ အဲဒါကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကတော့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုလုံးဝဖြတ်ထုတ်ပြီးသင့် ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ကျန်းမာစေခြင်းဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များ (ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းတွင်ရှိသောကြောင့်သူတို့ကိုသင်အနေဖြင့် Google သို့မပို့နိူင်ပါ) ၎င်းသည် ဦး နှောက်သည်လိင်ဆန္ဒကိုမည်သို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသောအရာနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုရှင်းပြသည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစွန့်လွှတ်ပြီးအဲဒါမပါဘဲဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာလေ့လာပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုမရှိဘဲပင်ထနိုင်ဘူး, ယခုငါက tugs အနည်းငယ်ပေးနှင့်သွားကြဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နိုင်ပြီ။ YMMV ဒါပေမယ့်မင်းဟာငါနဲ့တူနေသလိုပဲ။
ငါသည်သင်တို့ကိုရည်ညွှန်း site ကိုင်အလောင်းအစား။ ငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့သည် ကျနော့်အတွက်တော့ဒီ site မှာသူတို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေမြင်တွေ့ရသမျှကာလပတ်လုံးနီးပါးကြာမသွားခဲ့ပါဘူး။ စမ်းကြည့်ပါ ဦး
အရင်တုန်းကအခြားသူဘာလုပ်လုပ်ငါသူတို့ကိုငါဘယ်လောက်အထိဆွဲဆောင်တယ်၊ ဖြစ်ပျက်နေတာကိုပျော်မွေ့နေမယ့်အစားကိုယ့်ခေါင်းထဲမှာရှိနေတယ်၊ ​​ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံပန်းချီကားတစ်ချပ်ကိုစဉ်းစားဖို့ကြိုးစားတယ်၊ ငါခေါင်းမူးသလိုမခံစားရမချင်းအထိငါ့ကိုဖယ်ထုတ်ဖို့တစ်ခုခုခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားနေတယ်။
ငါ porn ကိုကြည့်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ကိုယ်တစ်ဦး handjob ကနေကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးအော်ဂဇင်တယ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခုတ်လှဲနှစ်ပတ်အကြာတွင်။ ထိုသို့သောတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ခံစားမှု။ ရုတ်တရက်ငါတကယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသွားကြကုန်အံ့နိုင်ဘူး။ ကြှနျတေျာ့စိတျထဲမှာမအတွေး။
ကျွန်ုပ်သည်ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်ခွင့်မရသေးကြောင်း ၀ န်ခံရမည်။ မတူညီတဲ့မိတ်ဖက်များနှင့်သုံးကြိမ်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ထိုအခါငါ porn ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနိမ့်ဆုံးအထိလျှော့ချ။ ငါတကယ်လုံခြုံသည်ဟုခံစားရသောသူနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၊ သူနှင့်လိင်ဆက်ဆံမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သောအခါကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ယုံကြည်မှုပိုရှိသည်။ ငါဒါမျှော်လင့်နေပါတယ်။ ငါတကယ်ရငျးနှီးမှုနှငျ့ယုံကွညျခွငျးကိုလိုအပျပါသညျ၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုကသို့ကစားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် link အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကြည့်ရှုသည်။ ငါထင်တာကတော့ယနေ့ခေတ်စိတ်ပညာပေါ်မှာပဲထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ဘဝအတွက်ရှာမတွေ့ဘူး။
ငါသည်သင်တို့ကဲ့သို့တူညီသောလှေ၌ရှိ၏, အခြားဘယ်သူ့ကိုမှနှင့်အတူလုံးဝချွတ်ရနိုင်ခြင်းနှင့်တကယ်ကအပေါ်ကင်လုပ်ခိုင်းကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရဘူး။ ငါတော်တော်များများဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲလို့ငါထင်တယ်၊ ငါလိင်ဆက်ဆံမှုကိုကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်၊ “ ကျွန်မရဲ့ဒစ်ကအလုပ်မလုပ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ” လို့တွေးမိပြီးပိုဆိုးစေတယ်။ သို့သော်သင်တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသည်နှင့်အမှုအရာများပြန်လည်လုပ်ကိုင်လာသောအခါယုံကြည်မှုပြန်ပေါ်လာပြီးယခုအချိန်တွင်ပျောက်ဆုံးရန်လွယ်ကူသွားသည်။
ထိုးဖောက်နိုင်သောလိင်နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုခဏစွန့်လွှတ်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုလိုသည်။ သင်က“ မြင်းပြန်ရ” နေချိန်မှာသင်လုံခြုံပြီးယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိသူတစ် ဦး ကိုကူညီရန်ကူညီပေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် မှစ၍ ပထမဆုံးအကြိမ် fucking မှအတွေ့အကြုံရင့်အော်ဂဇင်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ '' ၂၄) ။ ၎င်းသည် psychosomatic ဖြစ်စေ၊ မဖြစ်စေဖြစ်စေရလဒ်များသည်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောဆိုသည့်အချက် မှလွဲ၍ ၎င်းသည်ကျိန်းသေအလုပ်လုပ်သည်။
(nofap မတိုင်မီ) ငါတစ်နည်းနည်းနဲ့ Ive နီးပါးတစ်နှစ်အပေါ်တစ်ဦးအရူးအမူးခဲ့တာအဟောင်းတွေ / ကြီး၏မိန်းကလေးတယ်။ ကျွန်မသူမကိုယ်ကံကောင်းခံစားခဲ့ရငါ့အလိဂ်ထဲကခဲ့သည်ထင်။ ဒါပေမယ့်ငါ့အလိင်တံလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်နဲ့ကျွန်မသူမကိုနှစ်သက်လိုချင်ဘယ်လောက်သူမ၏ပြသနိုင်ဖို့အတွက်အချိန်အခါ။ ဒါဟာငါ့ကိုမအောင်မြင်ခဲ့ပေ။
ငါသူကပြောတယ် Shit နဲ့တူသလိုခံစားရတယ်။ ငါသည်ငါ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုပျက်စီးကျော်ကဖြစ်စဉ်းစားမိတယ်။ စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့သညျ။ ဒါနဲ့ပိုပြီး porn စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ခံစားရရန် masturbated ။ အရာထက်ပိုစိတ်ဓာတ်ကျငါ့ကိုထွက်ခွာသွားကြောင်းဖွင့်မယ့်ယာယီပြင်ဆင်ချက်ဖြစ်ထွက်လှည့်။
ကျွန်တော်အရှုံးမပေးချင်ဘူး၊ nofap အကြောင်းမသိခဲ့ဘူး။ ငါနေ့တိုင်း7ရက်ဖြောင့်ကဒီမှာသွားခဲ့သည်။ နေ့စဉ်အနည်းဆုံး ၃ နာရီစာဖတ်သည်။ ၁ ပတ်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့ငါဟာကျောက်တုံးကိုစိုက်ထူနိုင်ခဲ့ပြီး ၂ နာရီကြာမှလိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ ဒါကအံ့သြစရာကောင်းပြီးသူမတကယ်ပျော်နေပုံရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ပျော်ရွှင်ခဲ့သည်။ စူပါပါဝါများလား Fuck il ကယုံကြည်ကြသည်။ ငါသေချာပေါက် porn အဘို့အထွက်သွားတော့မည်ဖြစ်သကဲ့သို့ငါတတ်နိုင်သမျှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ငါ porn ကိုခဏစောင့်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ငါအရမ်းအားကောင်းတဲ့စိုက်ထူရသတိပြုမိ။ သင်ခက်ခဲသောဖြစ်ရန်ကောင်းသောခံစားရရှိရာသူတို့အားသူတို့ကိုငါသိ၏။ ငါသူတို့ကိုငါရတဲ့အခါငါဒါအစစ်အမှန်စိုက်ထူတူသောကြောင်းကိုမေ့လျော့။ ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမှန်မှန်ကြည့်တဲ့အခါငါတခါမှမပေါ်လာဘူး။ ငါရယူပြီးစိုက်ထူသော်လည်းခက်ခဲရုံမျှသာဖြစ်သည်။ ဒီစွဲလမ်းမှုကိုငါရင်ဆိုင်နေရတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကငါ့ကိုပိုပြီးတော့လှုံ့ဆော်ပေးလိမ့်မယ်။ အခြားသူကဒီဟာကိုကြုံဖူးသလား။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ငါပိုကောင်းသောစိုက်ထူမှုများရရှိသောအခါသူတို့မပြောနိုင်၊ မချစ်နိုင်ကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ဘယ်လောက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာကိုလည်းသူတို့ကပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒီမိန်းကလေးကကွန်ဒုံးကိုပိတ်လိုက်ရန်ပြောခဲ့တာကိုငါမှတ်မိသေးတယ်။ ငါလုံလုံလောက်လောက်မခက်ခဲဘူးလို့ခံစားခဲ့ရလို့ပါပဲ။
ဒါကြောင့်ငါမှာ PIED မရှိတော့ဘူး။ အခုတော့ငါသူကပြောတယ်မတန်နိုင်ဘူး။ ငါ MO'd မတိုင်မီရက်ပေါင်း ၅၀ လောက်တွင်ရှိခဲ့ပြီးထို့နောက်အသစ်တစ်ခုထပ်မံထွက်ပေါ်လာသော်လည်းလိင်ဆက်ဆံစဉ်ကာလအနည်းငယ်သာကြာနိုင်သည်။ အခြားမည်သူမဆိုဒီကြုံတွေ့ခဲ့သလဲ ကုစားနည်းရှိလား။
ငါသည်ဤ nofap Streak (ပိုကောင်းသောဘဝကိုအရည်အသွေးကို) နဲ့သွားသိမ်းထားချင်
ပထမ“ တစ်ပိုင်း” အောင်မြင်မှုရက်ပေါင်း ၈၀
ပထမ ဦး ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ငါဟာအဆိုးဆုံးကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်တစ်ခုကငါမပြန်သေးဘူးလို့ပြန်ပြောပြမယ်။ ယခုမူကားကျွန်ုပ်သည်အောင်မြင်သောအနာဂတ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၅ နှစ်ရှိပြီးလိင်ဆက်ဆံမှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။
လွန်ခဲ့သော ၃ လကကျွန်ုပ်သည်လှပသောမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအလွန်လျင်မြန်စွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရင်းနှီးမှုရရှိခဲ့သည်။
အခုတော့ငါ့ pmo အတိတ်အကြောင်းကိုသင်ပြောပြကြကုန်အံ့။
ငါကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ချိတ်ဆက်မိသည်။ လွန်ခဲ့သော ၃-၄ နှစ်ခန့်ကဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး ၁.၅-၂ နှစ်သာလျှင်ငါစွဲလမ်းလာသည်။
အဝတ်အချည်းစည်းသတင်းနှင့်အတူ softcore porn နှင့်ပစ္စည်းပစ္စယသာ။
ငါ YBOP ကိုချက်ချင်းရှာတွေ့လို့ကံကောင်းတာပဲ (ဘုရားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရား)
သူမသည် (ကျေးဇူးတင်စကားကျေးဇူးတင်စကားကျေးဇူးတင်စကား) ငြင်းဆန်ခဲ့သည် ..
အခုတော့တစ်ပါတ်အကြာအကြောင်းသူမကငါ့အိမ်ကိုမှလာ၏။ (အဘယ်သူမျှမ PMO ၏ 80 ရက်ပေါင်းပြီးနောက်)
သူမကကျွန်မကိုထိနေချိန်မှာငါ 80% ခိုင်မာသောအကြောင်းကိုသူမ၏နှင့်စိုက်ထူနမ်းခြင်းဖြင့်တစ်ပိုင်းစိုက်ထူသတိပြုမိသူငါ့ကိုပါးစပ်လိင်ပေးသည်နေစဉ်။
ကိုယ့်သူမ၏အတွင်းပိုင်းရရန်ပျက်ကွက်ပထမဦးစွာ3ရက်။ သို့သော် (ဗော့ဒ်ကာ 4-2 မျက်မှန်တစ်ဦးအကူအညီနှင့်အတူ) 3rth နေ့ကကိုယ့်နိုင်ခဲ့တယ် !!!
ကိုယ့်နောက်တဖန်ငါ၏အစိုက်ထူဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်အထိကျနော်တို့အကြောင်းကို 5-6 မိနစ်လိင်ရှိသည်။
ငါတိုးတက်လာတာကိုမြင်တော့ငါစိတ်ပျက်မသွားခဲ့ဘူး၊ အခုငါနေ့ ၁၂၀၊ ၂၀၀ ၂၀၀ မှာဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုစိတ်ကူးကြည့်လိုက်ပြီ။
ကျွန်ုပ်၏ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုကို PIED အကြောင်းစတင်လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သူသည်ဤအကြောင်းကိုအများပြည်သူသိရှိရန်စတင်ပြီးဖြစ်သည်။
သည်းခံခြင်းနဲ့အောင်မြင်မှုကို Be come..I သင်ကတိပေးလိမ့်မယ်။
သင်ပြန်လည်သက်ရောက်နိုင်သည့်အဆိုးရွားဆုံးသောနေ့ရက်များတွင်ပင်သင် porn ကိုကြည့်နေစဉ်ပျော်ရွှင်မှုရှိ၊ မဟုတ်ပါ။
ယောက်ျားတွေ porn၊ ဒါကငါ့အတွက်တော့ရွေးစရာမဟုတ်ဘူး။
နေသမျှကာလပတ်လုံးသင့်ဦးနှောက်လိုအပ်ချက်အဖြစ်ဘို့သည်းခံခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျလုပျနိုငျ၎င်း၏အကောင်းဆုံးအရာကတော့ ..
တစ်ခုမှာနောက်ဆုံးကိုယ်သင်ပြောပြချင်။ သငျသညျ ED ရှိသည်နှင့်သင်တစ်ဦး gf ရှိပါကသူမ၏တနေ့လုံးပါးစပ်လိင်ပေးပါ။
သူမ၏ clit ကိုမရပ်ပါနှင့်။ မိန်းကလေးများသည်ဤအရာကိုအလွန်နှစ်သက်ကြသည်။ Mf gf ကသူမကိုဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဘယ်တော့မှမရပ်တန့်နိုင်အောင်ငါ့ရဲ့ Erectile ကျန်းမာရေးကိုတောင်ပြန်ရနိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။
ငါနေ့ ၁၂၀ မှာမင်းရဲ့အခြေအနေကိုအသစ်ပြန်လည်မှာပါလိမ့်မယ် ..
အဘယ်မျှလောက်ကြာ PIED အောငျနိုငျဖို့ယူခဲ့တာလဲ
ငါတစ်နှစ်ကျော် porn induced erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါတိုတောင်းသောအချိန်များအတွက်ခက်ခဲရနိုင်ပေမယ့်အရင်ကကဲ့သို့အဖျက်စိုက်ထူအမျိုးအစားမဟုတ်။ PIED ရှိသူတွေ၊ သူတို့ဘယ်လောက်ကြာကြာလုပ်ခဲ့ကြတာလဲ၊ မင်းအတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့တာလဲငါသိချင်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နီးပါးတစ်လကျနော်တို့သိပ်လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအခုအပျော့သွားပါမှသာအချိန်ဖြစ်ပါသည်, ငါ့ရည်းစားစူပါလူနာကြီးနဲ့ကျွန်မတစ်တန်ထုတ်ကူညီပေးခဲ့သည်ထားတဲ့အောက်မေ့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုသိခဲ့ရတယ်။ ငါအရမ်းငါ့အသက်ကို၏ 10 နှစျကျြော masturbating ဦးချိုခွေးကိုကြည့်ကာ avid ညစ်ညမ်းခဲ့သညျ။
ငါခြောက်လခန့် PIED ခဲ့သည်။ ဒီဟာကိုလုံးလုံးလျားလျားရဖို့ ၅-၆ ​​လလောက်အချိန်ယူခဲ့ပေမယ့် ၂ လလောက်ကြာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်၊ ငါဟာတခြားအချိန်တွေမှာခက်ခဲတဲ့စိုက်ထူမှုတွေလုပ်ရတာကြောင့်မလွှဲမရှောင်သာရမယ့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုပြmoreနာဖြစ်လာတယ်။ ကျွန်တော်သည်ကောင်းသောနေ့များနှင့်ကောင်းမွန်သောနေ့များမရှိခဲ့ပါ။ လိင်မှုကိစ္စမှာတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်ငါ့ကိုအာရုံပြံ့သွားစေနိုင်တယ်၊ ယခုမူကားသွားပြီ။ PMO ဆီကနေအချိန်ယူပြီးသင်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဟေးလူ။ သငျသညျအစဉျအမွဲ PIED ခဲ့သလား အသက် ၂၀ မှာ ED ကိုကူးဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ : /
လင့်ခ် - ငါ ED ရှိခဲ့ဖူးတယ်၊ ငါပထမဆုံးအကြိမ်မထနိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒီမျဉ်းစောင်းမှာငါတစ်ချိန်ကလိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးပြီ၊ သို့သော်လည်းငါနှင့်လိင်ဆက်ဆံသောမိန်းကလေးနှင့်လည်းအလွန်ရင်းနှီးခဲ့သည်။
ငါရှိသောကြောင့်ငါ၏အ PIED နှင့် DE ၏ NoFap စတင်ခဲ့သည်။ အသက်အနှစ် 27 ငါ၏အကြိုတင်ဆယ်ကျော်သက်အင်တာနက် P ကိုနှင့် M ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အတိတ် 15 နှစ်သို့မဟုတ်ဒီတော့ကျော်ဘို့အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်နေ့ PMOing ခဲ့သည်။
ငါကံကောင်းတာလား၊ ငါဘာဖြစ်သလဲဆိုတာမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါပြောခဲ့တာတွေအားလုံးမရှိခဲ့ဘူး။ ငါကမိန်းကလေးတွေအများကြီးနဲ့အတူတူပဲ၊ လူတွေကိုအမြဲတမ်းကြည့်နေတတ်တယ်၊ အောင်မြင်တယ်၊ ဘယ်သူ့ကိုမှစကားမပြောနိုင်တာစသည်တို့ပေါ့။ ငါ ၅၀-၅၀ အခွင့်အလမ်းပိုရတယ်။ တစ်ခုစိုက်ထူရတဲ့၏ 50 အခွင့်အလမ်း။ မိန်းကလေးတွေပြောတာကမင်းကဘာလဲ? ဒီလိုမျိုး
ဒီတော့ဒီနေ့ဟာနည်းပညာပိုင်းအရ ၂၁ ရက်ဖြစ်ပေမယ့်ကျွန်တော်မှာသတင်းရှိပါတယ်။ ၁၉ ရက်တွင်ငါ HJ ရရှိပြီး ၅ မိနစ်ခန့်တွင်ပြီးဆုံးတော့မည်။ sensitivity ကိုလမ်းဖွင့်သည်။ လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးတစ်ခုလုံးကိုစိုက်ထူတော့မည်ဖြစ်သည်။ ငါမပြီးသေးဘူး အခုတော့ ၁၀၀% မဟုတ်ပေမယ့် ၈၅% လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ နေ့ ၁၉ ရက်မှာ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ငါပြောလိမ့်မယ်။
ယခုငါအနည်းဆုံးရက်ပေါင်း 90 ရှာပုံတော်အပေါ်ဆက်လက်သွားပေမယ့်ဒီ 21 ရက်အတွင်းငါ P သို့မဟုတ် M ကိုမသုံးကြဘူး။ ငါသည်လည်းလုပ်ဖို့မတိုက်တွန်းရှိသည်။ ငါ P နှင့် M ကိုသုံးဖို့မဟုတ်ဘဲချိတ်ဆက်ဖို့မယ့်တကယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းချက်များနှင့်အတူနိုး။
တစ်ခုခုကိုလမ်းငါအဓိကအောင်မြင်မှုအဖြစ်အကြှနျုပျ၏စာအုပ်၌ဤကိုချချပြီးနေပါတယ်။ တစ်ခုစိုက်ထူရနိုင်ဖြစ်ခြင်း, ငါကွန်ဒုံးရသွားကြဖို့ရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်တစ်ခုလုံးကိုအချိန်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်သောအခါ၌ပင်, ကကိုင်ထားပါ။
ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေသလဲဆိုတာသူတို့ကိုရှင်းပြခြင်းကအကူအညီဖြစ်စေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ဒါကြောင့်မဖြစ်ခဲ့ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖျောင်းဖျဖို့၊ စိတ်ပျက်ဖို့သူတို့ကိုငါသိပ်ဖိအားမပေးဘူး။
ထွက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်အတူ 63 ရက်ပေါင်းသွားလေ၏
ငါအရင်ကငါသွားကြောင်းခဲ့အရှည်ဆုံးအကြောင်းကို 63 ရက်ပေါင်းခဲ့ငါ့အဘို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစံချိန်ဖြစ်သည့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမရှိဘဲ 14 ရက်ပေါင်းသွားကြဖို့နိုင်ခဲ့သည်။ ငါအောက်တိုဘာလ 31 ၏ပိတ်ပွဲမိနစ် masturbated ထွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှစ်ဦးကိုဗီဒီယိုကြည့်ပြီးနောက်မှေ့ရာကြိတ်, အိပ်ရာထဲမှာလဲလျောင်းရှာဖွေတာမတိုင်မီ masturbating နှင့်အတူနိုဝင်ဘာလနှင့်ဒီဇင်ဘာလ 2016 အပေါငျးတို့သ go နိုင်ခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏ Streak နိုဝင်ဘာလ 1, 2016 အပေါ်စတင်ဇန်နဝါရီလ 3, 2017 အပေါ်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
ငါမကြာသေးမီကနှင့်ရိုးရိုးသားသားအနည်းငယ်စိတ်ဖိစီးမှုခံခဲ့ရသည်ဤသည်ကိုခံစားခဲ့ရကြောင့်အစွန်းပယ်ရှားပေမယ့်အော်ဂဇင်ကိုချွတ်လာမယ့်ဒီနေရာမှာထိုင်နေသကဲ့သို့ငါအလွန်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာရှင်းလင်းစွာ (အဖြစ်အပြင်တုန်ခါခေါင်းကိုက်) ရှိခြင်း ... ... ပထမတစ်ချက်အနေဖြင့်၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပြုခဲ့သော ၆၃ ရက်တာသည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုစွန့်လွှတ်မည့်အစားခံနိုင်ရည်အကြောင်းသာဖြစ်သည်။ ထို ၆၃ ရက်အတွင်းကျွန်ုပ်သည်အဝတ်အချည်းစည်းမရှိသောအမျိုးသမီးများ၏ဓါတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနေပြီးဗီဒီယိုများကိုနေ့စဉ်ကြည့်နေဆဲပင်။ ... ငါထင်တာကတော့ခံနိုင်ရည်အများကြီးပြခဲ့ပေမယ့်တကယ့်တိုးတက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူး။
အပြုသဘောဘက်တွင်, ငါအလွန်လျှော့ချဦးနှောက်မြူ, ပိုမိုအားကောင်းစိုက်ထူခြင်းနှင့်သာမန်အနေဖြင့်ခက်ခဲရနိုင်ဖြစ်ခြင်း, လက်တွေ့အမှုအရာများနှင့်ပုံမှန်လက်တွေ့ကျကျရှာဖွေနေအမျိုးသမီးများ, အစား porn ၏စိတ်ကူးယဉ်ဖို့ဆက်စပ်ဘာမှများ၏သက်ရောက်မှုကိုသတိပြုမိခဲ့တယျ။ ဘယ်ငါကောင်းတစ်ဦးအရာလို့ထင်ပါတယ်။
သို့တိုင်ကျွန်ုပ်၏ ၆၃ ရက်အတွက်ဂုဏ်ယူမိပါသည်၊ ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံမှတိုးတက်မှုထက်ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်နောက်တစ်ဆင့်တက်ချင်ပါသည်။ အကယ်၍သာ အကယ်၍သာ ရှိခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်အပြည့်အဝယုံကြည်သောကြောင့်၊ porn မ ငါအခု ၆၄ ရက်ကိုတွန်းပို့လိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်ငါနောက်ထပ် Streak ကိုစတင်ပါတော့မယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ PG တစ်ခုခုမှာကျွန်တော့်လက်တွေနဲ့ငါ့ browser ကိုသိမ်းထားဖို့ကြိုးစားပါ။
ဒီနည်းကိုဖတ်ရန် !! အကြှနျုပျ၏ခရီး (Super-အောင်မြင်သော)
ကြိုဆိုပါတယ်။ မကြာသေးမီကပဲဒီပုဒ်မထဲကို ၀ င်လိုက်ပြီးမတ်လ ၁၄ ရက်နေ့ကစပြီး PMO အအေးကြက်ဆင်ကိုထွက်လိုက်တယ်။ ဒါကြောင့် ၃၆ နှစ်ပြည့်ပြီးတစ်လကျော်သွားပြီဖြစ်လို့အခုထိငါ့အကြောင်းကိုအကျဉ်းချုပ်ပြန်ပြောပြတော့မယ်။ ကျွန်ုပ်၏ယခင်ပို့စ်များကိုသင်အမှန်တကယ်လေ့လာနိူင်သည်။ ပထမ နေ့မှစ၍ ကျွန်ုပ်၏ခရီး၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်၊
ဒါကြောင့်ဒီသက်တမ်းအတွင်းငါ PIED နှင့်စွဲလမ်းမှုအနည်းငယ်ရှိတယ်လို့သံသယဖြစ်ခဲ့တာကိုမှတ်မိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ porn ဟာငါ့အတွက်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်တာကြောင့်ငါb/ c ကိုကြည့်ရတာပိုကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုငါမစဉ်းစားနိုင်တော့ဘူး။ အမှားကြီး ငါမတ်လ 14 ခ / ခကြည့်နေတာတော့ရပ်လိုက်တယ်။ ငါ porn ကိုကြည့်နေတယ်။ ကျောက်တုံးတစ်ခုစိုက်ထူထားတယ်။ ဒါပေမယ့်သုက်မထိုးဘူး၊ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် fwb ဟောင်းမှဖုန်းခေါ် ဆို၍ မရနိုင်ပါ။ ငါစိတ်ပျက်မိတယ်သူမကငါ့ကိုရဲ့ထိပ်ပေါ်မှာစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောခံစားမိစေ၏။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကတည်းကငါ PMO အပေါ်ကျိန်ဆို။
သို့သော်အစ၌ကျွန်ုပ်သည် PI ကိုမကြည့်တော့သော်လည်း IG နှင့် WSHH ကဲ့သို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်ရှိအကြောင်းအရာများကိုနှိုးဆွနေသည်။ ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်ခဲ့ပေမဲ့ P ကိုကြည့်ရတာမအားမလပ်တော့နည်းနည်းလေးမှန်တိတ်နေတုန်းပဲ။ ဒါက xxx အကြောင်းအရာမဟုတ်ပေမယ့်တော်တော်လေးဆိုးရွားတဲ့အထိနီးကပ်နေဆဲပဲ ။
ငါပြောင်းလဲသွားတယ်သတိထားမိသောအရာ, ငါ့ flatline ငါရပ်တန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ကြောင့် 2.5 ပတ်သွားတူသောငါခံစားရအလွန်နက်ဖြန်နေ့၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သငျသညျတော်တော်များများအဘယ်သူမျှမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်စိတ်သို့မဟုတ်ဘာမှလုပ်ဖို့အလိုဆန္ဒရှိသည်ကြောင့်ဤကာလအတွင်းစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်းကျွန်မကောင်းသောရာသီဥတုရှိသည်ဖို့လုံလောကျကံကောင်းဖြစ်ကြောင်းကိုကတည်းကအခန်းထဲမှာထဲကရမယ့်ပြင်ပမှာအပြန်အလှန်နှင့်နေရောင်ကိုခံစားဖို့ငါ့အကိုအကောင်းဆုံးကိုပြု၏။ ဒါဟာတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ငါတပတ်ထုတ်လည်းနေ့စဉ် kegel excercises ပုံမှန် excercises မဟုတ်လုပ်နေတာပေမယ်ကအနည်းဆုံး3ကြိမ်ခံခဲ့ရသည်။ ငါသည်လည်းငါ၏အတှေးဖြစ်စဉ်ကိုများကဲ့သို့ခံစားမိခြင်းနှင့်စိတ်ကိုရှင်းလင်းခဲ့ကြသည်။
ကျွန်တော်သဘောပေါက်နားလည်လိုက်တာကကွဲပြားခြားနားပြီးအရမ်းအံ့သြဖို့ကောင်းတာကကျွန်တော်ဟာတစ်ခါတစ်ရံစိုစွတ်သောအိပ်မက်များဖြစ်ခဲ့တာပါ၊ တစ်ခါတစ်ရံစိုစွတ်သောအိပ်မက်များဖြစ်ခဲ့ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ငါ PMO အလေ့အထနှင့်အိပ်စက်ခြင်းကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမချန်လှပ်မိသည်နှင့်အိပ်စက်ခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံးည ၇ နာရီခန့်ရည်ရွယ်သည်။ ဤအရာများသည်သင်ဒီမှာအမြဲတမ်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည့်အရာများဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသော်လည်းကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ဤအကျိုးကျေးဇူးများကိုတိုးတက်မှုတစ်ခုတွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသော်လည်းပြန်မလာသေးသော်လည်းအနီးကပ်ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုရှိခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်မနေ့ကကျမ ၂၁ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပါ။ မင်းအသက် ၂၁ နှစ်မှာအရက်သောက်ခြင်းအားဖြင့်မင်းကိုကျင်းပသင့်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါစကားပြောနေတဲ့ကောင်မလေးအခုရောက်လာပြီး၊ ငါဟာ PIED, Performance Anxiety ဒါမှမဟုတ် Stressed ကောလိပ်ကနေင်ကြောင့်မကြာခဏအကြိမ်ကြိမ်ရုန်းကန်ခဲ့ရပေမဲ့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်လိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ ဒါဟာဖြစ်ကောင်းသုံးခုပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။ ပြီးတော့ကျမလိင်ဆက်ဆံဖို့မအောင်မြင်တဲ့ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုအပြီးမှာ P ဟာငါမထနိုင်တာ၊ သူမစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပေမယ့်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တောင်ပြောခဲ့တယ်။ ဒီတော့မင်းမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာရှက်စရာကောင်းပေမယ့်ရင်ဘတ်ထဲကနေထွက်လာတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်သင်နဲ့သူမအတွက်ခရီးသွားနေရတုန်းပဲ။
ပြီးတော့အရက်လုံးဝအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်မယုံဘူး၊ သူမကကျွန်မကိုကြိတ်နေတုန်းမှာကျွန်မအပြည့်အဝစိုက်ထူခဲ့တယ်။ ကွန်ဒုံးကိုကိုင်ပြီးအဲဒါကိုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့လုံးဝသေသွားတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူး။ ကျွန်မတို့လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြတာပါ။ ကျွန်မသူမဆီကို sexy အနေအထားနဲ့ပြန်လှောင်ပြောင်ရင်းအိပ်လိုက်တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်သူမငါ့ကိုမထိမိခဲ့ပါဘူး။ သူဟာကျွန်မရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းနဲ့စင်ကြယ်မှုကိုပြန်လည်တည့်မတ်ပေးပြီးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ 10 မိနစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းအတွက်သွား! ဒါကကျွန်တော့်အတွက်ပန်းတိုင်တစ်ခုတည်းပဲ၊ ဒါကသဘာဝဖြစ်ထွန်းအောင်အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်၊
ငါစဉ်းစားရုံနဲ့ပိုပြီးနှိုးဆော်ခြင်းကြောင့် porn ကို fuck ဆိုတဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးခံစားချက်ပဲ! သူမကချစ်စရာကောင်းသည်ဟုသင်ထင်သကဲ့သို့သင်မပျော်မရွှင်ဖြစ်နေပြီးသင့်ငပဲသည်မိန်းကလေးတစ် ဦး အားတကယ့်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်မဟုတ်ဘဲတုန့်ပြန်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒါကငါ့ရဲ့အတွေ့အကြုံပဲ။ ငါဒီကိုရှေ့ကနေသာသွားဖို့စီစဉ်ထားပြီးငါဟာပုံမှန် PMO'er တစ်ယောက်ပါ။
ဝမ်းနည်းပါတယ်ဒီ post အရမ်းရှည်ခဲ့ပေမယ့်ငါမျှော်လင့်ပါတယ်တစ်စုံတစ် ဦး ကမှလာအောင်နှိုးဆွချင်တယ်။ ငါထပ်ခါတလဲလဲပြန်ပြောခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ ဤပုံပြင်များကိုမြင်လျှင်ဆက်လက်ငါနားလည်သဘောပေါက်ပေမယ့်သင်ယောက်ျားတွေ PMO ကိုပြင်းထန်စွာရှောင်ရှားရန်ထိုခြေလှမ်းလုပ်ဖို့ရှိသည် ဒီအတွေ့အကြုံကသင်ဟာလူသစ်တစ်ခုလိုခံစားရတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အရိပ်တစ်ခုလိုမဟုတ်ဘဲခံစားချက်အသစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါကကျွန်တော့်ရဲ့ပထမဆုံးကြိုးပမ်းမှုပဲ။ ဒါကြောင့်သင်အဲဒါကိုလုပ်နိုင်တယ်သင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့စိတ်၊ ဒစ်နဲ့ဘဝကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခြင်းကမထိုက်တန်ဘူး။ ကောင်းသော Lucky fellas!
နေ့ 38 နှင့်ငါ့ဘဝလုံးဝပြောင်းလဲသွားသည်။
မင်္ဂလာပါကျနော်လိင်ရတဲ့တကယ်တကယ်ခက်ခဲတစ်ခုခုသည်အဘယ်မှာရှိမွတ်စ်လင်အများစုနိုင်ငံကနေမိပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ခေါင်းစဉ်မှလာမယ့်နှင့်အမှုအရာတိုတိုအောင်။ ငါအတိတ် 10 နှစ်ပေါင်းထံမှ masturbating ပါပြီ။ ကျွန်မအခု 22 ဖြစ်၏။ ငါ porn အစဉ်အဆက်မည်သူမဆိုတို့အားပေးနိုင်ကြောင်းသမျှသောအိပ်မက်ဆိုး facing ခဲ့သညျ။ အဘယ်သူမျှမစိုစွတ်သောအိပ်မက်မျှနံနက်သစ်သား, အဘယ်သူမျှမမိတ်ဆွေများက (မပင်အထီး), ပင်ပင် fb ပေါ်မှာစကားပြောစရာမိန်းကလေး။ ငါပြင်းထန် ED ၌ရှိ၏။ အတိတ်ကာလနှစ်ခုပြည့်တန်ဆာတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားခဲ့သေးအိပ်ရာမစိုက်ထူခဲ့ခြင်းနှင့်ငါမပိုကမ္ဘာပေါ်မှာလူတဖြစ်ကြောင်းကိုဆိုတဲ့အချက်ကိုယုံကြည်ငါ့ကိုလူရှုပ်များ ပို. ပင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ငါသည်ငါ၏အပြည့်အဝအပျနှံနှင့်အတူပြန် NoFap 38 ရက်ပေါင်းစတင်ခဲ့ပြီးနဲ့ကျွန်မဂုဏ်နအစစ်အမှန်ဖြစ်ဆိုဖို့အကြောင်းဖြစ်၏အစဉ်အဆက်အဘယျသို့အကြှနျုပျကိုယုံကွညျသညျ။
ငါ့မှာသေရမယ့်ကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်းတွေငါ့မှာရှိတယ်။ ငါ့မှာတရားဝင် gfs ၃ ခုရှိတယ် ငါ fb မှတစ်ခု၊ တစ်ခုကကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းနှင့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သည်ကျပန်းအစည်းအဝေးမှဖြစ်သည်။ ငါကြီးမားတဲ့အချိန်ပြီးနောက်ဤကာလ၌ငါ့နေ့စွဲရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါအရမ်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေတုန်းပဲငါနမ်းပြီးဖက်လိုက်တယ်။ ထိုမိန်းကလေးနှင့်အတူနောက်ထပ်တွေ့ဆုံခြင်း၊ ငါနှင့်ခိုင်မာသောစိုက်ထူမှုများရှိပြီးသူမသည်ကျွန်ုပ်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည်။ ကျနော်တို့အိပ်ရာပေါ်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတတိယအကြိမ်ကြောက်မက်ဘွယ်ရှိ၏ တစ်နာရီကျော်ကြာအောင်နမ်းပြီးပွေ့ဖက်လိုက်တယ်။ သူမကငါ့ကို blowjobs တွေပေးပြီးတစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေပေးခဲ့တယ်။ သူမမလွှတ်ပေးနိုင်ဘူး၊ ငါဟာတစ်ချိန်လုံးခဲယဉ်းနေတယ်၊ ​​မင်းမှာမင်းဆေးဝါးတစ်ခုခုသောက်ဖူးလားလို့သူမကပြောတယ်။ ငါသူမကအချိန်ကာလကြောင့်သူမက ... ငါမ fuck ဆိုတဲ့ခဲ့ဟုပြောသည်
နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးယခုငါသည်ငါ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်စတင်ငါအားကစားရုံစတင်ခဲ့ပြီးနှင့်သန့်ရှင်းသော (အများအားဖြင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, အဘယ်သူမျှမသကြားနှင့်ရေနံ) အစာစားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ယခုတွင်ငါသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှပသောမြင်လျက်မရုပ်ဆိုးအသုံးမကျမထင်မှတ်သော။ ငါ့အသက်ကိုလုံးဝပြောင်းလဲကဲ့သို့ဖြစ်၏။
ငါ၏အစိုက်ထူခိုင်မာတဲ့မဟုတ်နှင့်ရမ္မက်ပဲခံနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ငါပြားချပ်ချပ်လိုင်းပေါ်နေဆဲဖြစ်၏။ သို့သော်လည်းငါသည်ငါ့အသက်ကိုငါပထမဦးဆုံးအစိုစွတ်သောအိပ်မက်ကိုမြင်မက်သောအရာကိုယနေ့ခန့်မှန်း။ ကိုယ့်လာမယ့်5နှစ်များတွင်လက်ထပ်ရတဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားနိုင်အောင်ဝမ်းသာတယ်။
ငါသည်သင်တို့ကို NoFap ငါ့ကိုထောက်ခံခဲ့သူကဒီမှာကလူတိုင်းချစ်ကြတယ်။
24M,3+ နှစ်ပေါင်းပြင်းထန် PIED ။ ငါ့အသက်ကို၏မတ်ေတာမှနောက်ဆုံးညဥ့်ကျမရဲ့အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ကြီးမားသောယုံကြည်မှုထပ်တိုး။ ကိုယ့်ကိုမျှဝေလို AMA အခမဲ့ခံစားရသည်။
များစွာသောလိင်ဆက်ဆံရန်မအောင်မြင်သောကြိုးပမ်းမှုများအပြီးတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဤ nofap တွင် ၃ နှစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် (၈၇ ရက်သည်ကျွန်ုပ်၏အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်ဟုထင်သည်) ကျွန်ုပ်သည်ကြီးမားသောအစုအဝေးတစ်ခုကိုဘယ်သောအခါမျှစုဆောင်းခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သွားစရာလမ်းများစွာရှိနေသေးသော်လည်းဤရောဂါကိုကုသနိုင်သည်။ ဘာကြောင့်စတင်ခဲ့တာလဲဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။
PIED ဆယ်နေ့ 32 ပြန်လည်စုစည်းမှု
ငါသည်ငါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ကိလေသာလွန်ကျူးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့ porn အပေါ်မှီခိုဖြစ်လာသောကြောင့်ငါ NoFap စတင်ခဲ့သည်။ ငါ၏အရည်းစားနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကိုယ့်မှာအားလုံးဖွင်မခံခဲ့ရ, ငါ porn နှင့်အတူနှိုးဆော်ခြင်းတယ်ငါနှင့်အတူမှားဘယ်အရာကိုထွက်တွက်ဆလို့မရဘူးလမ်းကိုနဲ့တူနှိုးဆော်ခြင်းတဲ့မခံခဲ့ရပါဘူး။
ယခုငါနောက်ကျောကိုကြည့်ကြောင်း, ငါ dopamine အလုအယက်ရဖို့အချို့အလွန်အမင်းလိုက်တယ် porn စောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။
နေ့ရက်များငါပြီးပြည့်စုံ flatline ၌ရှိ၏ 1 -Day 10 ငါ bot တစ်ကောင်မှာအားလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာမှခံစားရဘဲ, ငါသည်ငါ့လိင်တံလုံးဝသေခံစားရတယ်။ ပဲဒီတော့ငါတစ်ခုစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နိုင်ခဲ့သည်ကိုသိ porn စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းခံစားရတယ်။
နေ့6Girlfriend သည်ငါနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံကြိုးစားခဲ့ငါ flatline ၏အလွန်အောက်ခြေမှာကြီးနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျ, ငါဘာမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသမျှခံစားရပါဘူး။
နေ့ 12 တစ်ဦးစိုစွတ်သောအိပ်မက်အတွေ့အကြုံ။ ကျွန်မအတိအကျအိပ်မက်သတိရမနိုင်ပေမယ့်ငါ့ကိုမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်နှင့်သူမ၏နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းကျနော် ejaculated ။
နေ့ 16 ငါ% 50 ဖို့အားနည်းနေနံနက်စိုက်ထူဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး 60 ရှိခြင်းစတင်ခဲ့ပြီးဆဲနှင့်တစ်ဦး flatline ထဲကနှင့်စိတ်ဓာတ် feeling, ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ပေါ်ဆင်းခဲ့ပေမယ့်ငါဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏အဆုံးမှာအလင်းမြင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းခံစားရရန်စတင်ခဲ့သည်။
နေ့ 19 နံနက်ယံ၌တစ်ဦး 60-70% စိုက်ထူအတွေ့အကြုံ, နောက်ပိုင်းတွင်ထိုနေ့ရက်သည်ရည်းစားနှင့်အတူနမ်းနှင့်သူမ၏အတူနမ်းနေချိန်မှာငါ့အစိုက်ထူဘဝမှလာမယ့်ခံစားရတယ်။ လိင်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
နေ့ 20 PMO (porn တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအော်ဂဇင်) ကိုရမ္မက်ရဖို့ Started, အားကစားခန်းမမှာစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
နေ့ 21 နံနက်ယံ၌ငါ၏အစိုက်ထူဘယ်မှာအားကောင်းကြောင်းသတိပြုမိသည်။ တစ်ရက် 17 ကနေနေ့က 21 မှသိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများကိုသတိပြုမိသည်။
နေ့ 23 ငါ flatline သို့ကျဆင်းသွားနဲ့တူခံစားခဲ့ပြီးမှတဖန်နည်းနည်းစိတ်ဓာတ်နှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပေါ်ချခံစားရတယ်။
နေ့ 24- နေ့ 32 porn ကိုကြည့်၏လိုအပ်မှုမရှိဘဲခက်ခဲများနှင့်ခက်ခဲရတဲ့ငါ့အစိုက်ထူခံစားရ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအလုပ်ရှုပ်လူမှုရေးတည်းခိုနှင့်နံနက်တိုင်းငါ့အပြတင်းပေါက်များကပျံနေတဲ့နဂါးယင်ကောင်များကဲ့သို့အသက်တာ၌သေးငယ်တဲ့အမှုအရာ, ခံစား။ ငါနောက်ဆုံးရက်အနည်းငယ်အတွင်းသိသိသာသာတိုးတက်မှုသတိပြုမိကိုယ်အကြောင်းကိုအကောင်းခံစားမိခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုပြန်လည်စတင်ပါပြီ။
ငါ NoFap တကယ်ပဲငါ့ကိုမထုတ်ကူညီပေးခဲ့တယ်ငါ NoFap မရှိဘဲအဖြေတစ်ခုတွေ့ပြီမယ်လို့စဉ်းစားကြဘူး, တိုးတက်မှု post ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။